Daniel – 2kalluunka
Home / Kitaabka Quduuska ah / Old Testament / Daniel
1:1 Sannaddii saddexaad oo boqornimadii Yehooyaaqiim oo ah boqorka dalka Yahuudah, Nebukadnesar oo ahaa boqorkii Baabuloon Yeruusaalem buu yimid oo hareereeyey.
1:2 Markaasaa Rabbigu wuxuu soo geliyey inuu gacanta Yehooyaaqiim oo ah boqorka dalka Yahuudah, iyo qayb ka mid ah weelashii guriga Ilaah. Oo wuxuu iyagii kaxaystay galay dalka Shincaar, gurigii ilaahiisa, oo weelashiina wuxuu geliyey qolladdii ilaahiisa khasnadda u ahaa ee.
1:3 Markaasaa boqorkii u sheegay Ashfenas, oo madax ka ah iyo bohommadii, u sheegay inuu keeno in qaar ka mid ah reer binu Israa'iil, iyo qaar ka mid ah farcankii boqorka iyo sovereigns ah:
1:4 nin oo dhallinyaro ah, oo aan iin lahayn, sharaf leh muuqaalka, oo la gaadhay xagga xigmadda oo dhan, taxadarnaa aqoonta, oo si fiican u bartay, iyo kuwa istaagi karin jooga daarta boqorka, oo sidaas daraaddeed ayuu iyaga baro xarfaha iyo afka reer Kaldayiin ah.
1:5 Markaasaa boqorkii u yeellay qodobada maalin kasta, ka uu cuntada u gaar ah oo ka fogaadaa khamri uu isaga qudhiisu ka cabbay, si, ka dib markii lagu quudiyo muddo saddex sano ah, ay hortiisa boqorka istaagi lahaa.
1:6 Hadda, ka mid ah kuwa ka mid ah reer Yahuudah, waxaa jiray Daniel, Xananyaah, Miishaa'eel, iyo Casaryaah.
1:7 Oo amiirka bohommada ayaa magacyo u yeellay: Daanyeel, Beelteshaasar; u soo baxay Xananyaah, Shadrag; si Miishaa'eel, iyo Meeshag; iyo in Casaryaah, Cabeednegoo.
1:8 Laakiin Daniel xalin wuxuu qalbiga ku haystay uusan ugu nijaasoobin lahaa ee boqorka iyo cuntada, mana iyo khamriga uu cabbo, ayuu ka mid ah madaxda iyo bohommadii inuu aan la wasakhaysan.
1:9 Oo sidaas daraaddeed Ilaah siiyey Daniel nimco iyo hortiisa naxariis ka mid ah hogaamiye bohommada.
1:10 Madaxdii bohommada ayaa sheegay in Daniel, "Waxaan ka cabsanayaa sayidkayga boqorka ah, oo rukunka cuntada iyo cabitaanka aad u, kuwaas oo, haddii ay tahay in uu arko in wajiga u yihiin il-badan kuwa ka mid ah dhallinyarada kale ee da'daada, aad madaxayga in boqorka xukumi lahaa. "
1:11 Markaasaa Daanyeel ku yidhi Malasar, kuwaas oo amiir u ahaa raggiisii ​​bohommada inuu u taliyo Daanyeel magacaabay, Xananyaah, Miishaa'eel, iyo Casaryaah,
1:12 "Waxaan kaa baryayaa inaad noo tijaabin, addoommadaada, toban maalmood, oo ha xididada la inoo siiyey inay wax cunaan oo biyo ay cabbaan,
1:13 ka dibna u dhawrtaan wejigayagii, iyo Wajiyada carruurta cunaan cuntada boqorka, oo markaas annagoo addoommadaada ah sida ay waxa aad arki qaban. "
1:14 Markuu waxyaalahaas maqlay, buu ku tijaabiyey iyagii toban maalmood.
1:15 Laakiin, toban maalmood ka dib, wejiyadooduna waxay u fiican oo ka buurbuurnaayeen badan dhammaan carruurta kuwaas oo ka soo cuntada boqorka wax cunay muuqday.
1:16 Intaas ka dib, Malasar qaaday qaybo iyo khamri la cabbo, oo iyagii wuxuu siiyey xididada.
1:17 Weliba, in carruurtan, Ilaah siiyey aqoon, iyo edbinta kitaabkii kasta, iyo xigmad, laakiin in Daniel, sidoo kale fahanka iyo riyooyin oo dhan.
1:18 Oo goortii xilligii la dhameeyey, ka dib markii boqorku wax ku sheegay in ay la soo lahaa, oo madax ahaa raggiisii ​​bohommada keenay iyagii Nebukadnesar hortiisa wax shar ku ah.
1:19 Markaasay, Laakiin boqorkii kolkuu soo wada iyaga la, waxaa lahaa ayaan weli la helay wax sidaas u weyn sida Daniel dunida oo dhan, Xananyaah, Miishaa'eel, iyo Casaryaah; iyo si ay dadka hortooda ku boqorku wuxuu ag taagnaa.
1:20 Oo fikrad kasta oo xigmad iyo waxgarasho, ku saabsan oo boqorka iyaga la tashado, wuxuu iyagii ku ogaaday in toban jeer kaga fiican yihiin wax arkayaashii iyo xiddigiyayaashii wada saaray, ahaa ee boqortooyadiisa oo dhan.
1:21 Oo sidaas daraaddeed Daanyeel ku hadhay, ilaa sannaddii kowaad oo Boqor Kuuros.
2:1 Oo sannaddii labaad oo boqornimadii Nebukadnesar, Nebukadnesar oo arkay riyo, iyo ruuxa ka argagaxay, markaasaan riyadii uu isaga ka cararay.
2:2 Oo weliba boqorkii wuxuu ku amray in awday, iyo xiddigiyayaasha, iyo saaxiriintii, iyo reer Kaldayiin la soo wada ururin inuu u muujiyo inay boqorka u sheegaan riyooyinkiisii. Markii ay soo gaareen, waxay istaageen hore ee boqorka.
2:3 Markaasaa boqorkii wuxuu ku yidhi iyagii, "Waxaan arkay riyo, iyo, la wareersan ee maanka, Anigu garan maayo wixii aan arkay. "
2:4 Iyo kuwii reer Kaldayiin ahaa boqorkii Syriac jawaabay, "Boqorow, weligiis wuu noolaan. U sheeg riyadii addoommadaada, iyo waxaannu Muujin doonaa fasirkiisa. "
2:5 Oo jawaab, boqorkii reer Kaldayiin u sheegay, "Xusuustiisu waxaa ka mid ah ayaa ka cararay iga. Haddii waxaad Muujinaysaan riyadii ii, oo macnaheeda, waxaa laguu gelin doonaa in la dilo, iyo guryo aad la wareegi doonaa.
2:6 Laakiin haddii aad sharaxdo riyadii iyo macnaha, waxaad heli doontaa iga abaalmariyo, iyo hadiyado, iyo ciso weyn. Sidaa darteed, Muujin ii caddayn riyadii iyo fasirkeediiba. "
2:7 Waxay mar kale u jawaabay oo wuxuu ku yidhi, "Boqorow, riyadii wuxuu addoommadiisii ​​ku sheeg, iyo waxaannu Muujin doonaa fasirkiisa. "
2:8 Boqorkiina waa u jawaabay oo wuxuu ku yidhi, "Waxaan hubaa in aad hakad geliyay muddo sababtoo ah waxaad ogtahay in xasuusta waxa ka mid ah ayaa ka cararay iga.
2:9 Sidaa darteed, haddii aadan muujin ii riyadii, halkaas waxa lagu soo gunaanaday mid ka mid ah oo kaliya in la soo gaadhay adiga kugu saabsan, in fasiraadda waa sidaas oo been ah, iyo buuxiyey oo ka buuxa khiyaano, si inaad igula hadashaan ilaa wakhtiga idlaanayaa. Oo sidaas daraaddeed, riyadii ii sheega, si kale oo aan ku ogaan doonaa in fasiraadda in aad ii sheegi waa sidaas oo run ah. "
2:10 Markaasaa kuwii reer Kaldayiin jawaabay isagoo boqorkii hor, oo waxay yidhaahdeen, "Ma jiro nin dhulka oo eraygaaga ugu dhammayn kartaa, Boqorow. Waayo, mana uu leeyahay wax Boqor, Si kastaba ha ahaatee weyn oo xoog leh, weydiistay jawaab noocan ah ka wax arke kasta, iyo xiddigiye, iyo reer Kaldayiin.
2:11 Waayo, jawaabta inaad doonataan, Boqorow, waa mid aad u adag. Oo ninna waxaa laga heli karaa yaa muujin kara hortiisa boqorka, ilaahyada mooyaane, wada hadalka kuwaas oo aan waa la jiray rag. "
2:12 Laakiin goortuu waxaas maqlay, boqorka ayaa amray, cadho iyo cadho weyn, in dhammaan raggii xigmadda lahaa oo Baabuloon waa la wada dumin.
2:13 Oo markii amar ka baxeen, Oo raggii xigmadda lahaa la dilay; iyo Daanyeel iyo saaxiibbadiis la doondoonay, waa lagu baabbi'in.
2:14 Markaasaa Daanyeel wax weyddiiyey, ku saabsan sharciga iyo xukunka, of Aryoog, guud ee boqorka ciidankiisana, oo u soo baxay si ay u fuliyaan raggii xigmadda lahaa oo Baabuloon.
2:15 Markaasuu weyddiiyey, kuwaas oo helay amar boqorka, waxa sabab xukunka naxariis lahayn noocan oo kale ah ayaa ka soo baxday wejiga boqorka. Oo sidaas daraaddeed, marka Aryoog ayaa shaaca ka qaaday in ay arrinta Daniel,
2:16 Daanyeel u galay oo la weydiiyay boqorka inuu isaga siiyo waqti ay ku muujin xal u ah boqorka.
2:17 Markaasuu tegey oo wuxuu galay guriga iyo sharaxay hawsha u soo baxay Xananyaah, iyo Miishaa'eel, iyo Casaryaah, oo isaga saaxiibbadiis ah,
2:18 sidaa darteed waxay doonayaan inay Naxariis dushiisa oo ah Ilaaha samada hortiisa, ku saabsan qarsoodigan, oo sidaas daraaddeed Daanyeel iyo saaxiibbadiis laga yaabaa in aan la baabbi'in raggii Baabuloon oo xigmadda lahaa oo kale.
2:19 Markaasaa qarsoodigii loo muujiyey Daanyeel riyo oo habeennimo. Markaasaa Daanyeel u duceeyey Ilaaha samada,
2:20 mashxarad hadlaya, ayuu yiri, "Waxaa laga yaabaa Rabbiga magiciisa ku barakoobi by jiilka haatan jooga iyo weligiisba; Waayo, xigmaddu iyo dulqaad, waa inuu.
2:21 Oo isna wuxuu wixiii jeer oo da 'ah. Wuxuu ka qaadaa boqortooyooyinkii oo wuxuu iyaga ku abuurayaa. Wiixuu siiyaa xigmo kuwa xirfadaha caqliga iyo baridda kuwa wax kasi.
2:22 Wuxuu dejin waxyaalaha hoos u dhaadheer oo qarsoon, oo wuxuu ogyahay waxa loo sameeyey in gudcur. Iyo iftiinku waa isaga la.
2:23 in aad, Ilaahii awowayaashayo, anna waan ku qiran, Adiguna, waxaan ammaanayaa. Waayo, waxaad siiyey xigmad iyo dulqaad ii, oo hadda aad lay Waxyooday Aniga waxa aan idin warsanmaayo, waayo, waxaad isu qaawisay mid na boqorka ee fikirrada waayo. "
2:24 Taas ka dib, Daanyeel u galay Aryoog, oo boqorku u doortay inuu baabbi'iyo raggii Baabuloon oo xigmadda, oo wuu la hadlay isagii jidka this, "Ha baabbi'iyo raggii Baabuloon oo xigmadda lahaa. ii keena boqorka ka hor, oo waxaan sharxi doonaa xal u ah boqorka. "
2:25 Markaasaa Aryoog haddiiba si dhaqso ah u keenay Daniel boqorkii ku, oo wuxuu ku yidhi isagii, "Waxaan ka helay nin ka mid ahaa wiilashii transmigration reer Yahuudah, kuwaas oo ku dhawaaqi doono xal u ah boqorka. "
2:26 Boqorkiina waa u jawaabay oo ku yidhi Daanyeel, oo magiciisa la odhan jiray Beelteshaasar, "Ha aad runtii u malaynayso in aad wax Muujin kara oon ii riyadii aan arkay iyo fasirkeediiba?"
2:27 iyo Daniel, jeeda boqorka, jawaabay oo ku yidhi, "Qarsoon in boqorkii wuxuu doonayaa, Oo raggii xigmadda lahaa, awday, iyo kuwa wax sheega awoodin inuu muujiyo inuu boqorka ka.
2:28 Laakiin waxaa jira Ilaah oo jannada ku jira, kuwaas oo shaaca ka qaaday qarsoon, ayaa shaaca ka qaaday in aad, Boqor Nebukadnesar, waxa dhici doona wakhtiga ugu dambaysta. Your riyo iyo waxyaalihii lay tusayna, aad sariirta ku dul, waa kuwan oo kale.
2:29 Waxaad, Boqorow, waxay bilaabeen inay u malaynayso, halka aad buste, oo ku saabsan waxa hadda dabadeed wuxuu noqon doonaa. Oo kii ayaa shaaca ka qaaday qarsoon idinka tusay waxa dhici doona.
2:30 ii, sidaas oo kale, qarsoodigan la muujiyo, ma leedahay xigmad sida tan igu jirtaa tahay in ka badan in wax kale oo nool, laakiin si fasiraadda laga yaabaa in lagu muujiyo in boqorka, iyo si aad u ogaato waxa laga yaabaa fikirrada maankiinna.
2:31 Waxaad, Boqorow, miinshaar, oo bal eeg, wax u eg taallo weyn. taalada Tani, taas oo ahayd weyn oo dheer, ag taagnaa waxay ku sara marayaan aad kor ku xusan, oo aad ogtahay sida looga cabsado, waxay ahayd.
2:32 Madaxa taalada this ahaa dahabkii ugu fiicnaa, laakiin laabteeda iyo gacmaheeduna waxay ahaayeen lacag ah, oo dheeraad ah, ka caloosheeda iyo bowdooyinkeeduna waxay ahaayeen naxaas;
2:33 laakiin ka Faydatay Dhudhumadeeda waxay ahaayeen bir ah, qayb ka mid ah qaar ka mid ah cagaha ahaa birta iyo qayb kale ahaayeen dhoobo.
2:34 Oo sidaas daraaddeed waxaad u eegay ilaa dhagax la jebiyey oo aan gacmo buur ka, oo waxay ku taalada cagaheeda, kaas oo ahaa birta iyo dhoobada, oo isna wuu kala jejebin.
2:35 Markaas birta, dhoobadii, naxaasta, lacagtii, iyo dahab ahaayeen kuwo isku jajabiyey iyo sii dhinmaan, sida dambaska barxadda xagaaga, oo ay si deg deg ah lagu kaxaystay oo dabayshii, iyo meella loogu helin iyaga u; laakiin dhagaxa ku dhuftay taalada wuxuu noqday buur weyn oo dhulka oo dhan buuxiyey.
2:36 Riyadii waa tan; waxaan sidoo kale fasirkiisa ka sheegi doonaa in aad ka hor, Boqorow.
2:37 Adigu waxaad tahay boqorkii boqorrada dhexdooda ah, oo Ilaaha samadu siiyey inaad boqortooyo, iyo dulqaad,, iyo xoogga, iyo ammaan,
2:38 oo meel kasta oo ay marayeen binu-aadmiga oo dugaagga duurka oo deggan. Waxa uu sidaas oo kale la siin xayawaan duulaya hawada gacanta idiin geliyey, oo uu kaalinta wax walba hoos aad boqortooyadiisii. Sidaa darteed, waxaad tahay madaxii dahabka ahaa.
2:39 Oo waa inaad ka dib, boqortooyo kale oo ku soo kici doona, idinkama liito innaba, oo lacag ah, iyo boqortooyo kale oo saddexaad oo naxaas ah, oo wuxuu xukumi doonaa dunida oo dhan.
2:40 Oo boqortooyada afraadna waxay u noqon doonaa sida bir oo kale. Sida UMSW bir iyo Adkaada waxyaalahan oo dhan, sidaa daraadeed waxa uu burburin doonaa, oo intaas oo dhammu waxay burburin.
2:41 Intaas waxaa sii dheer, maxaa yeelay, sidaad u aragtay cagaha iyo faraha lugeed oo ah qayb ka mid ah dhulka dheriyasameeyaha ee dhoobo qaarna yahay birta noqon, boqortooyada waxaa lagu qaybsan doonaa, laakiin weli, ka warqada bir ah ku qaadan doonaa ay asal ahaan, tan iyo aad u aragtay birta ku qasan yahay earthenware ka soo dhoobo.
2:42 Oo sidii faraha cagaha qaarkood ahaayeen qayb bir ah iyo qayb ka mid ah dhoobo, qayb ka mid ah boqortooyada noqon doonaa xoog leh oo ka qeyb burburin doonaa.
2:43 Weliba, maxaa yeelay, sidaad u aragtay birta ku qasan pottery dhulka ka, waxay lagu daro doonaa farcankii nin, laakiinse iyagu ma ay u hoggaansamaan doonaa in midkiinba midka kale, sida bir aan lagu qasi karaa earthenware.
2:44 Laakiin wakhtigii boqortooyooyinkaas, Ilaaha samada dhiirrin doona boqortooyo aan la baabbi'in doonaa, iyo boqortooyadiisa ma waxaa loo dhiibi doonaa dadka kale, iyo, wuu burburin doonaa, oo boqortooyooyinka kale oo dhan, kuwaas oo wada baabbi'in doonaa, iyo boqortooyada this laftiisa in daa'in istaagi doonaan.
2:45 Iyadoo la tixraacayo wixii aad aragtay, maxaa yeelay, dhagixii oo la bakhtiistay buurta ka aan gacmo, iyo waxa la jajabiyey earthenware ah, iyo tan birta, iyo tan naxaasta, iyo lacagta, iyo dahabkii, Ilaaha weynu wuxuu, boqorow, ku cad waxa dhici doona ka dib markii. Oo riyaduna waa run, iyo fasirkeediiba waa aamin. "
2:46 Markaasaa boqorkii ahaa Nebukadnesar wejigiisa u dhacay iyo caabuday Daniel, oo wuxuu amray inay u bixiyaan in allabari isaga dhibbanayaasha iyo foox.
2:47 Oo sidaas daraaddeed boqorkii hadlay oo Daanyeel oo wuxuu ku yidhi, "Runtii,, Ilaahaagu waa Ilaaha ilaahyada, iyo Sayidka boqorrada, iyo sidoo kale mid muujiya waxyaalo qarsoon, tan iyo aad u qaawisid yaabaa qarsoodigan. "
2:48 Markaasaa boqorkii sara kiciyey Daniel in darajo sare iyo isaga siiyey hadiyado badan oo waaweyn, oo wuxuu isagii u magacaabay amiir gobolladiisa oo Baabuloon oo dhan oo sida nin madax ah ayaa xaakinnadii waxay wada talin jiray kulli raggii xigmadda lahaa oo Baabuloon oo kale.
2:49 Si kastaba ha ahaatee, Daniel baahan yahay boqorka in uu magacaabi Shadrag, iyo Meeshag, iyo Cabeednegoo ka sarraysiisay shuqullada gobolkii Baabuloon. Laakiin Daniel ahaa albaabka boqorka ee.
3:1 King Nebukadnesar wuxuu sameeyey taallo ah oo dahab ah, lixdan dhudhun, oo ballaadhkeeduna lix dhudhun yahay, oo wuxuu qotomiyey bannaankii Duuraa oo ku yaal gobolka Baabuloon.
3:2 Markaasaa Boqor Nebukadnesar soo cid diray inaan soo wada ururiyo taliyayaashii, xaakinno iyo qaadiyo, Guud iyo sovereigns iyo taliyayaasha, iyo dhamaan madaxda gobollada, si ay isugu yimaadaan furitaanka ekaanta, oo Boqor Nebukadnesar uu kiciyey.
3:3 Markaasaa taliyayaashii, xaakinno iyo qaadiyo, Guud iyo sovereigns iyo kuwii gobta, kii waxaa loo doortay in ay awood, iyo dhamaan madaxda gobollada la isugu keenay si ay u isugu daahirinteeda taalada, oo Boqor Nebukadnesar uu kiciyey. Oo sidaas daraaddeed waxay ka hor taalada uu Boqor Nebukadnesar qotomiyey istaagay.
3:4 Oo wacdiya qaylo naadiyey, "Idinka waa laydin yiri, inay dadyowga aad, qabiilooyinka, iyo kuwa kala afka,
3:5 in saacad marka aad maqli doontaa dhawaaqa buunka, iyo biibiilaha, iyo shareerad, kataaradda iyo shareeradda, oo ka mid ah Symphony iyo cayn kasta oo muusiko, waa in aad hoos u dhacdaan oo u Sujuudaan ekaanta dahabka ah, oo Boqor Nebukadnesar qotomiyey.
3:6 Laakiin qof uuni hadduu ma sujuudi doonaan, oo Khayrja, ee isla saacaddiiba waxaa uu lagu tuuri doonaa foorno dab ah oo dab ka ololayo. "
3:7 Taas ka dib, oo sidaas daraaddeed, sida ugu dhakhsaha badan dadkii oo dhammu maqleen codkii buunka, ee beebka iyo shareerad, kataaradda iyo shareeradda, oo ka mid ah Symphony iyo cayn kasta oo muusiko, dadyowga oo dhan, qabiilooyinka, iyo kuwa kala afka hoos u dhaceen oo caabuday ekaanta dahabka ah, oo Boqor Nebukadnesar qotomiyey.
3:8 iyo ugu dhakhsaha badan, oo ku saabsan waqti isku mid ah, qaar ka mid ah reer Kaldayiin saameynta yimid oo Yuhuuddii dacweeyey,
3:9 oo waxay ku yidhaahdeen Boqor Nebukadnesar, "Boqorow, weligiis wuu noolaan.
3:10 Waxaad, Boqorow, ku adkeeyey amar, sidaa darteed, nin kasta oo laga yaabo in ka maqashaan dhawaaqa buunka, ee beebka iyo shareerad, kataaradda iyo shareeradda, oo ka mid ah Symphony iyo cayn kasta oo muusiko, isaga qudhiisa u Sujuuda doonaa oo Khayrja ekaanta dahabka ah.
3:11 Laakiinse haddii nin hoos ma u dhici doonaa oo Khayrja, ayuu lagu tuuri lahaa foornada dabka ololaya.
3:12 Weli waxaa jira saameynta Yuhuudda, oo aad u dooratay ka sarraysiisay shuqullada gobolka Baabuloon, Shadrag, iyo Meeshag, iyo Cabeednegoo. nimankanu, Boqorow, ayaa quudhsaday amar aad. Waxay ha caabudin Ilaahyadiinna, oo iyagu ma ay Khayrja ekaanta dahabka ah oo aad ka soo kiciyey ah. "
3:13 Markaasaa Nebukadnesar, cadho iyo cadho, amray in Shadrag, iyo Meeshag, iyo Cabeednegoo waa in la keenay, oo sidaas, iyada oo aan dib u dhac, waxay boqorkii hortiisa la keenay.
3:14 Oo Boqor Nebukadnesar oo iyaga la hadlay oo wuxuu ku yidhi, "Ma runbaa, Shadrag, iyo Meeshag, iyo Cabeednegoo, in aad ha caabudin ilaahyadayda iiga soo, mana Khayrja ekaanta dahabka ah, taas oo aan qotomiyey?
3:15 Sidaa darteed, haddii aad hadda u darbay, mar kasta oo aad ka maqashaan dhawaaqa buunka, biibiile, shareerad, iyo kataaradda, iyo shareeradda, iyo, oo ka mid ah Symphony iyo cayn kasta oo muusiko, oo Sujuuda oo Khayrja taalada aan sameeyey. Laakiin haddii aadan Khayrja doonaa, in saacaddaas idin la tuuri doonaan foornada dabka ololaya. Oo yaa Ilaah ah in aad samatabbixin doonaa gacantayda ka?"
3:16 Shadrag, iyo Meeshag, iyo Cabeednegoo u jawaabeen oo ku yidhaahdeen Boqor Nebukadnesar, "Ma wanaagsana for noo idin addeeci xaalkan.
3:17 Waayo, Ilaah bal eeg, kaas oo aynu ku caabudaan, waa awoodaa inuu naga samatabbixiyo foornada dabka ololaya oo uu inaga oo lacag la'aan ah gacmahaaga ka, Boqorow.
3:18 Laakiin xitaa hadii uusan Doono, ha lagu dhex ogaado inaad, Boqorow, oo aynaan ugu adeegi doontaan ilaahyo aad, mana Khayrja ekaanta dahabka ah, taas oo aad ka soo kiciyey. "
3:19 Markaasaa Nebukadnesar waxaa ka buuxsamay cadho iyo muuqaalka kore ee araggii wejigiisa ayaa ugu cadhooday Shadrag, iyo Meeshag, iyo Cabeednegoo, oo wuxuu ku amray in foornada laga sii kululeeyo waa in toddoba jeer ay dabka caadiga ah.
3:20 Oo wuxuu ku amray ragga xoogga badan ee isaga iyo ciidankiisii ​​cagaha Shadrag inay xidhxidhaan, iyo Meeshag, iyo Cabeednegoo, oo ay ku dhex tuuraan foornada dabka ololaya.
3:21 Kolkiiba nimankii la xidhxidhay, oo ay la socdaan iyagoo jubbadahoodii, iyo go'yaashoodii, iyo kabaha, Dharkooduna, waxaa lagu tuuray dhexe ee foornada dabka ololaya.
3:22 Laakiin boqorka amarkiisii ​​ahaa si deg deg ah in foornada laga sii kululeeyo waxaa xad-dhaafka ah. Sidaas darteed, Nimankaas tuuray ee Shadrag, iyo Meeshag, iyo Cabeednegoo, ayaa lagu dilay by dab ololkiisu wax ka.
3:23 Laakiin saddexdaas nin, in uu yahay, Shadrag, iyo Meeshag, iyo Cabeednegoo, isagoo ku xidhnaan, hoos u dhaceen dhexe ee foornada dabka ololaya.
3:24 Oo iyana way ku dhex olol baa ku dul socda, Wayna ammaanayeen Ilaah oo Rabbiga ammaanaya.
3:25 Markaasaa Casaryaah, halka taagan, tukaday sidan, iyo afkiisa furitaanka ee dabka dhexdiisa ah, ayuu yiri:
3:26 "Waad barakaysan tihiin, Rabbiyow, Ilaaha awowayaasheen, oo magacaaguna waa amaan iyo ammaan ah dhammaan da'aha.
3:27 Waayo, xaq baad ku tahay waxyaalaha aad dhammaysid noo dhan, iyo shuqulladaada oo dhan waa run,, iyo siyaabaha aad xaq yihiin, iyo xukummadayda oo dhan waa run.
3:28 Waayo, idinku waxaad ka dhigteen xukummo siman run in wixii aad inoo keentay dul iyo Yeruusaalem oo dhan, magaalada quduuska ah awowayaashayo. Waayo, run iyo garsoorid, ayaa aad waxyaalahan oo dhan hoos u keenay dembigayaga aawadiis.
3:29 Waayo, waannu dembaabnay, oo aan xumaan ka go'an in noqoshada aad ka, oo aannu ka xumaadeen in wax walba.
3:30 Oo annaguna waxaannu ma ay dhegaysan amarradaadii, midna wax aan arkay ama samaysay sidii aad nagu amartay, si ay u si fiican noo raaco.
3:31 Sidaa darteed, wax kasta oo aad inoo keentay dul, iyo in aad nagu samaysay oo dhan, waayo,, waxaad samaysay in Garsoorid daacad ah.
3:32 Oo aad naga samatabbixiyey gacantii cadaawayaashiinnii geliyey: Khaa'in, dulmi iyo inta badan kuwa sharka leh, iyo boqorkii a, dulmi iyo inta badan kuwa sharka leh, xitaa ka sii badan yihiin kuwa kale oo dhan dhulka.
3:33 Haddaba, ma awoodno in la furo afkooda our. Waxaan ku noqon ceeb iyo sharaf dhac annagoo addoommadaada ah iyo kuwa waxaad Caabudaysaan.
3:34 Ha ka badan noo gacanta weligeedba, waxaannu idinka baryaynaa, sababta oo ah magaca, hana joojin idinka qaadnay ballan.
3:35 Oo ha noqoto, noo naxariiso ka, maxaa yeelay, Ibraahim, gacaliyahaagii, iyo Isxaaq, anoo addoonkaaga ah, oo reer binu Israa'iil, Kaaga quduuska.
3:36 Waxaad iyaga kula hadlay oo la, yaboohaysaan in la idin tarmin lahaa Caruurtooda sida xiddigaha samada iyo sida cammuudda badda xeebteeda taal.
3:37 Waayo, waxaynu, Rabbiyow, dhinmaan badan dadyowga kale oo dhan, waxaana hooseeyo keenay dhulka oo dhan, maanta, dembigayaga aawadiis.
3:38 Ma jiro, xiligaan, hoggaamiye, ama taliye, ama Nabi, mana gubo kasta, ama allabari, ama qurbaan hadhuudh, ama foox, meel ama midhaha ugu horreeya, indhahaaga ku,
3:39 sidaa darteed waxaa laga yaabaa inaan si aad u ogaato Naxariis. Si kastaba ha ahaatee, naftiinna oo jaban iyo ruuxa kuwa is-hoosaysiiya, aynu la aqbali.
3:40 Just sidii gubo oo wanan ah iyo dibi, iyo sidii kun oo baraar ah baruurta, sidaa darteed ha noo allabari ahaan in maanta adiga hortaadaba, ee inay idin raalli. Waayo, waxaa jira ceeb lahayn, kuwa isku kaa halleeyaa.
3:41 Haddaba waan idin raaci kal iyo laab ah, oo waxaan ka Cabsataan, oo waxaan aad wejigaaga u doondoono.
3:42 Ha na ceebaysay, laakiin ka qaban nala heshiiska aad la turid iyo sida uu naxariistiisa badan aawadeed aad.
3:43 Oo naga badbaadiyo by yaabab iyo ammaan magacaaga, Rabbiyow.
3:44 Oo ha dhammaan kuwa ceeboobi kuwaas oo keeni addoommadaada dhinaca xun. Waxaa laga yaabaa in ay isku qasmi xoogga oo dhan, iyo xooggaaga oo la jajabiyey waxaa laga yaabaa in.
3:45 Waxaana laga yaabaa in ay u ogaadaan in aad tahay Rabbiga, Ilaaha keligiis ah, iyo ammaan badan kor ku xusan dunida. "
3:46 Oo iyagu ma ay joogsan, kuwa goob joog ka ahaa boqorka kaasoo iyaga kaga ridday, in foornada laga sii kululeeyo saliid, iyo geed linen, iyo garoonka, iyo burush.
3:47 Oo olol baa huleeshay soo kor foornadana sagaal iyo afartan dhudhun,.
3:48 Oo dabka ka qarxay oo la gubo kuwa reer Kaldayiin ah gudahood ay gaari u dhow foornada.
3:49 Laakiin malaa'igtii Rabbiga ayaa intay la Casaryaah oo isaga saaxiibbadiis ah foornada; oo ka mid ah foornada dabka ah oo dab ololkiisu wax uu ku tuuray.
3:50 Oo wuxuu kaloo sameeyey dhexe ee foornada oo kale kacday, dabayl qoyan, oo dabka iyaga taaban, mana dhibi, hana u dhibin at dhan.
3:51 Markaas Saddexdaas, sida haddii isku cod, ammaanay oo lagu ammaanay oo Ilaah ammaanay, in foornada, oo wuxuu ku yidhi:
3:52 "Waad barakaysan tihiin, Sayidow,, Ilaahii awowayaashayo: amaan, iyo ammaan badan, oo ka wada sarreeyey weligiis. Waxaa barakaysan magaca quduuska ah oo aad ammaan: amaan, iyo sarraysiin dhammaan ayuu ka sarreeyaa, da 'kasta.
3:53 Waad barakaysan tihiin macbudka quduuska ah oo aad ammaan: amaan oo dhan kor ku xusan iyo wixii ka sarreeya oo dhan iyo weligiis sarraysiiyey.
3:54 Waxaa barakaysan aad tahay carshiga boqortooyadaada: amaan oo dhan kor ku xusan iyo wixii ka sarreeya oo dhan iyo weligiis sarraysiiyey.
3:55 aad Waxaa barakaysan kan aragtay yaamayska iyo keruubiimta ku dul fadhiday: amaan iyo wixii ka sarreeya oo dhan iyo weligiis sarraysiiyey.
3:56 Waxaa barakaysan aad ku sugan tahay meeshii bannaanayd oo samada: amaan iyo ammaan badan weligeedba.
3:57 All shuqullada Rabbiga, Rabbiga ammaana: ammaan iyo ku sarraysiiyeen kor ku xusan oo dhan iyo weligiis.
3:58 Malaa'igta Rabbiga, Rabbiga ammaana: ammaan iyo ku sarraysiiyeen kor ku xusan oo dhan iyo weligiis.
3:59 Cirka, Rabbiga ammaana: ammaan iyo ku sarraysiiyeen kor ku xusan oo dhan iyo weligiis.
3:60 Dhamaan biyaha samooyinka ka sarreeyow, Rabbiga ammaana: ammaan iyo ku sarraysiiyeen kor ku xusan oo dhan iyo weligiis.
3:61 Dhammaan awoodaha Rabbiga, Rabbiga ammaana: ammaan iyo ku sarraysiiyeen kor ku xusan oo dhan iyo weligiis.
3:62 Qorraxda iyo Dayaxa, Rabbiga ammaana: ammaan iyo ku sarraysiiyeen kor ku xusan oo dhan iyo weligiis.
3:63 Xiddigaha samada oo, Rabbiga ammaana: ammaan iyo ku sarraysiiyeen kor ku xusan oo dhan iyo weligiis.
3:64 roob kasta iyo sayaxa, Rabbiga ammaana: ammaan iyo ku sarraysiiyeen kor ku xusan oo dhan iyo weligiis.
3:65 neefta kasta oo Ilaah, Rabbiga ammaana: ammaan iyo ku sarraysiiyeen kor ku xusan oo dhan iyo weligiis.
3:66 Dabka iyo uumi, Rabbiga ammaana: ammaan iyo ku sarraysiiyeen kor ku xusan oo dhan iyo weligiis.
3:67 Qabow iyo kulayl, Rabbiga ammaana: ammaan iyo ku sarraysiiyeen kor ku xusan oo dhan iyo weligiis.
3:68 Dews iyo dhaxan, Rabbiga ammaana: ammaan iyo ku sarraysiiyeen kor ku xusan oo dhan iyo weligiis.
3:69 Ufo iyo jiilaalka, Rabbiga ammaana: ammaan iyo ku sarraysiiyeen kor ku xusan oo dhan iyo weligiis.
3:70 Iyo baraf, Rabbiga ammaana: ammaan iyo ku sarraysiiyeen kor ku xusan oo dhan iyo weligiis.
3:71 Habeen iyo maalinba, Rabbiga ammaana: ammaan iyo ku sarraysiiyeen kor ku xusan oo dhan iyo weligiis.
3:72 Nuurka iyo gudcurka, Rabbiga ammaana: ammaan iyo ku sarraysiiyeen kor ku xusan oo dhan iyo weligiis.
3:73 Hillaac, iyo daruuraha, Rabbiga ammaana: ammaan iyo ku sarraysiiyeen kor ku xusan oo dhan iyo weligiis.
3:74 dalkii Rabbiga barakeeyo: oo ammaan iyo ku sarraysiiyeen kor ku xusan oo dhan iyo weligiis.
3:75 Buuro iyo kuro, Rabbiga ammaana: ammaan iyo ku sarraysiiyeen kor ku xusan oo dhan iyo weligiis.
3:76 Waxyaalahan oo dhan ee ku kora dalka, Rabbiga ammaana: ammaan iyo ku sarraysiiyeen kor ku xusan oo dhan iyo weligiis.
3:77 ilihii, Rabbiga ammaana: ammaan iyo ku sarraysiiyeen kor ku xusan oo dhan iyo weligiis.
3:78 Iyo badaha iyo Wabiyaal, Rabbiga ammaana: ammaan iyo ku sarraysiiyeen kor ku xusan oo dhan iyo weligiis.
3:79 Nibiriyada badda iyo waxyaalaha ku jira oo dhan in guurto biyaha ku, Rabbiga ammaana: ammaan iyo ku sarraysiiyeen kor ku xusan oo dhan iyo weligiis.
3:80 Waxyaalahan oo dhan ayaa duusha oo samooyinka, Rabbiga ammaana: ammaan iyo ku sarraysiiyeen kor ku xusan oo dhan iyo weligiis.
3:81 All dhulsocotada iyo xoolahaba, Rabbiga ammaana: ammaan iyo ku sarraysiiyeen kor ku xusan oo dhan iyo weligiis.
3:82 Binu-aadmiga, Rabbiga ammaana: ammaan iyo ku sarraysiiyeen kor ku xusan oo dhan iyo weligiis.
3:83 Israa'iil Rabbiga barakeeyo: oo ammaan iyo ku sarraysiiyeen kor ku xusan oo dhan iyo weligiis.
3:84 Ee Rabbiga wadaaddo u, Rabbiga ammaana: ammaan iyo ku sarraysiiyeen kor ku xusan oo dhan iyo weligiis.
3:85 Addoommadii Rabbiga, Rabbiga ammaana: ammaan iyo ku sarraysiiyeen kor ku xusan oo dhan iyo weligiis.
3:86 Ruux iyo Naftooda kuwa xaqa ah, Rabbiga ammaana: ammaan iyo ku sarraysiiyeen kor ku xusan oo dhan iyo weligiis.
3:87 Kuwa quduuska ah iyo kuwa is-hoosaysiiya in wadnaha, Rabbiga ammaana: ammaan iyo ku sarraysiiyeen kor ku xusan oo dhan iyo weligiis.
3:88 Xananyaah, Casaryaah, Miishaa'eel, Rabbiga ammaana: ammaan iyo ku sarraysiiyeen kor ku xusan oo dhan iyo weligiis. Waayo, wuu na samatabbixiyey She'ool, iyo gacanta dhimashada naga badbaadisay, oo na sii daayay ka dhex dab loogu gubo ah, oo naga dabka dhexdiisa ka badbaadiyay.
3:89 Rabbiga ku mahad naqa, waayo, isagu waa wanaagsan yahay: maxaa yeelay, naxariistiisu weligeedba waa.
3:90 All kuwa dhawrsaday, Rabbiga ammaana, Ilaaha ilaahyada: ammaana isaga iyo isaga ku qiro maxaa yeelay, naxariistiisu waa ka ab. "
3:91 Markaasaa Boqor Nebukadnesar yaabay, oo uu si dhaqso ah kacay oo ku idhi kuwii gobta uu: "Ma Miyaynan saddex nin oo katiinadeysan oo dab ka dhex galay?"Ka jawaabidda boqorka, oo waxay ku yidhaahdeen, "True, Boqorow ".
3:92 Wuxuu u jawaabay oo ku yidhi, "Bal eeg, Waxaan arkaa afar nin oo furan oo dabka ku dhex socda, oo innaba waxyeello ma gaadhin waxa dhexdooda ku jira, iyo muuqaalka kore ee afraadna wuxuu u eg yahay mid ka mid ah Ilaah. "
3:93 Markaasaa Nebukadnesar soo dhawaaday meesha laga galo foornada dabka ololaya, oo isna wuxuu yidhi, "Shadrag, iyo Meeshag, iyo Cabeednegoo, addoommadii Ilaaha ugu sarreeya, ka soo baxo iyo hab. "Markiiba Shadrag, iyo Meeshag, iyo Cabeednegoo ka soo baxeen, oo dabka ku dhex ah.
3:94 Oo markii saraakiishii, oo xaakinnadiina, iyo xaakinnada, iyo awood boqorka ahaa isa soo tubeen, waxay tixgeliyo nimankan maxaa yeelay, dabkii lahaa awood uma jidhkooda, iyo inaan tin keliya oo ay madaxa la gubay, iyo surwaal ay aan la saameeyeen, iyo urta dabka iyaga gal ma maray.
3:95 Markaasaa Nebukadnesar, Cadha baxay, sheegay, "Waxaa barakaysan Ilaahooda, Ilaaha Shadrag, iyo Meeshag, iyo Cabeednegoo, kuwaas oo malaa'igtiisii ​​u soo diray oo addoommadiisii ​​ku rumaystay isaga soo badbaadiyay. Oo iyana waxay beddeli xukunka boqorka, oo waxay u dhiibay jidhkooda, oo sidaas daraaddeed ma waxay u adeegi lahaa ama Khayrja ilaah kale Ilaahooda marka laga reebo.
3:96 Sidaa darteed, amar this waxaa la aasaasay ii by: in dad kasta, qabiilka, iyo afka, mar kasta oo ay ku caytamay ka dhanka ah Ilaaha Shadrag, iyo Meeshag, iyo Cabeednegoo, halligmi doonaan iyo guryahooda waa la baabbi'in doonaa. Waayo, ma jiro ilaah kale oo waa kan kara inuu wax badbaadiyo hab this. "
3:97 Markaasaa boqorkii Shadrag, iyo Meeshag, iyo Cabeednegoo in gobolkii Baabuloon.
3:98 Nebukadnesar, boqorka, waxaa dadyowga oo dhan, quruumaha, iyo kuwa kala afka, deggan oo dunida oo dhan, waxaa laga yaabaa in nabad la kordhin kula.
3:99 Ilaaha ugu sarreeya ayaa dhammaado calaamooyin iyo yaabab ila. Sidaa darteed, waxa uu igu faraxday inaad naadisaan
3:100 Calaamooyinka, kuwaas oo weyn, iyo yaabab uu, taas oo ah waa xoog badan. Waayo, boqortooyadiisii ​​waa boqortooyo weligeed jiraysa, iyo xooggiisa sii ab ka ab.
4:1 Waxaan, Nebukadnesar, content in gurigayga iyo horumarka waxaan ku raaxaysanayay daartayda ahaa.
4:2 Waxaan arkay riyo in i cabsiiyey, oo fikirradayda ah ayaan sariirtayda la tusay ee madaxayga ii soo dhibtay.
4:3 Oo sidaas daraaddeed amar la aasaasay ii by, in dhammaan raggii xigmadda lahaa oo Baabuloon laga keenay i hor, iyo wax ay iigu inuu u muujiyo jawaabta riyadii.
4:4 Markaas awday, xiddigiyayaasha, reer Kaldayiin, iyo kuwa wax sheega galay, oo waxaan sharaxay ku saabsan waxa riyada micneheedu yahay in ay joogaan, laakiinse iyagu ma ay daaha ka ay ii jawaaba.
4:5 Oo markaas saaxiibkood waxaa i hor yimid, Daniel, (oo magiciisa la odhan jiray Beelteshaasar sida magaca ilaahay,) kuwaas oo uu leeyahay, ruuxii ilaahyada quduuska ah oo uu aad u gudahood, markaasaan riyadii ku si toos ah u sheegay isaga in.
4:6 Beelteshaasar, Hogaamiyaha arkayaashii, tan iyo markii aan ogahay in aad qabto in aad ku jirta ruuxa, oo ka mid ah ilaahyada quduuska, iyo in wax qarsoon ma jiro gaari aad si, sharxi i tusay riyooyin aan, oo waxaan arkay, iyo xalka iyaga.
4:7 Tani waxa ay ahayd aragti ah ee madaxa arkay anigoo sariirtayda ku saabsan. wax baan fiiriyey, oo bal eeg, geed dhexe ee dhulka, oo sarajooggeeduna wuxuu ahaa aad iyo aad u weyn.
4:8 Geedkii ahaa waaweyn oo xoog badan, oo sarajooggeeduna wuxuu samada gaadhay. Waxaa loo arki karaa jidka oo dhan si ay dhulka ugu shishaysa oo dhan.
4:9 caleemo ahaayeen kuwo aad u qurux badan, iyo midhihiisaba ahaa mid aad u badan, iyo waxa ku jira, cuntadiisuna waxay ahayd dunida oo dhan. waxaa Under, xoolaha iyo dugaagga ahaayeen, iyo laamihiisa, haadka samada ayaa la da'da ah, iyo waxa ka, -aadmiga oo dhan isagay.
4:10 Baan riyadii ku arkay ee madaxayga saarnaa aan bustaha, oo bal eeg, mid wax dhawra oo quduus ah oo samada ka soo degtay.
4:11 qaylo ah, wuxuuna ku qayliyey, iyo inuu taas ka hadlay: "Geedka ku jaro iyo laamihiisa ka jarin; jara, caleemihiisana iyo firdhin midhihiisa; ha xayawaanka carari, kuwaas oo waxaa ka hoosaysay, iyo haadda laamihiisa ka.
4:12 Si kastaba ha ahaatee, jiridda iyo xididdadiisa dhulka ku, oo ha lagu xidho iyagoo ku xidhan xadhig bir iyo naxaas ah ka mid ah dhirta, taas oo u dhow yihiin, oo ha la taabtay by dharabka samadu, oo ha meeshiisii ​​la dugaagga duurka ku dhex dhirta ee dhulka uga jiri.
4:13 Qalbigiisuna kan dadka ha ka beddelmo isagoo aadanaha, oo qalbigoodu ha xayawaanka duurjoogta ah lagu siiyey isaga inay, oo ha toddoba muddo wakhti gudbaan.
4:14 Tani waa amar ka soo xukunka dhawra xaalkuna, iyo go'aanka iyo ku dhawaaqidda kuwa quduuska ah, ilaa nool waxay ogaan doonaan in Mid ka mid ah Sare u taliyo boqortooyada dadka, iyo in uu ku siin doonaa in alla kii uu doonana, oo wuxuu ka dhigan doonaa ninka ugu hooseeya waxa ka badan. "
4:15 Waxaan, Boqor Nebukadnesar, arkay riyo this. Oo waa inaad sidaas oo, Beelteshaasar, waa in si deg deg ah u sharax ii fasiraadda maxaa yeelay, nin kasta oo xigmad leh ee boqortooyadayda joogay waa inuu caddeeyo macnaha waxaa ka mid ah ii awoodaan. Laakiin aad awoodo, maxaa yeelay, ruuxii ilaahyada quduuska ah ayaa aad ee.
4:16 Markaasaa Daanyeel, oo magiciisa la odhan jiray Beelteshaasar, bilaabay aamusnaan in aad ka fikirto isku qiyaastii hal saac, iyo fikirradiisiina wuu la welwelay. Laakiinse boqorku wuxuu ku jawaabay, oo wuxuu ku yidhi, "Beelteshaasar, ha ku riyadii iyo fasirkeediiba aad ku dhibin. "Beelteshaasar jawaabay oo ku yidhi, "Sayidkaygiiyow, riyadu waa kuwa idin neceb, iyo fasirkeediiba waxaa laga yaabaa in aad cadaawayaashiinna, waayo,.
4:17 Geedkii aad aragtay wuu jiray ay dureri dhexdeeda oo xoog badan; sarajooggiisuna wuxuu gaadhay xagga samada, oo waxaa loo arki karaa dunida oo dhan.
4:18 Oo laamihiisa ahaayeen kuwo aad u qurux badan, iyo midhihiisaba aad u badan, iyo waxa ku jira cuntada ahayd oo dhan. waxaa Under, degganaa dugaagga duurka, iyo laamihiisa, haadka hawada joogay.
4:19 Waa adiga, Boqorow, ayaa si weyn u xurmayn, oo aad ku xoogaysteen, runtase. Oo aad adigu badatid oo aad awood, oo waxay gaadhaysaa xataa xagga samada u, iyo sharci waa in dhulka darafyadiisa oo dhan.
4:20 Oo weliba boqorkii wuxuu sidoo kale arkay mid wax dhawra oo quduus ah oo samada ka soo dagno oo waxaad ku tidhaahdaan: 'Geedka ku jaro iyo kala firdhiyaan; Si kastaba ha ahaatee, jiridda iyo xididdadiisa dhulka ku, oo ha lagu xidho bir iyo naxaas ah, ka mid ah dhirta ku xeeran, oo ha la rusheeyey dharabka samadu, oo ha quudinta la jirto xayawaanka duurjoogta ah noqon, Ilaa toddoba muddo wakhti gudbaan. '
4:21 Waa kan waxaas fasirkiisii ​​xukunka ugu sarreeya, taas oo ay gaareen, sayidkaygiiyow, boqorka.
4:22 Waxay idinka saari doonaan oo dadka laga dhex, oo aad la joogi xayawaanka iyo dugaagga duurka u noqon doonaa, oo waxaad cuni doontaan hay sida dibi oo kale, oo aad la armuu doona dharabka samada. Sidoo kale, toddoba muddo of time kiin kor mari doonaa, ilaa aad ogtahay in Mid ka mid ah Sare walbay u talisaa boqortooyada dadka, oo wuxuu ku siiyo ku alla kii uu doonana.
4:23 Laakiin, tan iyo markii uu ku amray in yeeshee jiridda iyo xididdadiisa, in uu yahay, geedka, waa in ay ka tageen, boqortooyadaada waa laga tegi doonaa, waayo, waxaad, ka dib markii aad ogaaday in awood waa ka ilaahnimadiisa.
4:24 Taas darteed, Boqorow, taladayda ha idiin aqbali karo. Oo dembiyadiinna ayaa la sadaqo furto, oo xumaatooyinkiinna la naxariisto masaakiinta. Waxaa laga yaabaa in uu dambiyada aad ka cafiyi doonaa. "
4:25 Waxyaalahan oo dhan ayaa waxay yimaadeen raqdii Boqor Nebukadnesar.
4:26 Ka dib markii dhamaadka laba iyo toban bilood, uu la lugeeyo jooga daarta Baabuloon.
4:27 Markaasaa boqorkii wuxuu la hadlay dhawaaq, oo wuxuu ku yidhi, "Kanu sow ma aha Baabuloontii weynayd, Wixii aan dhisay, sida guriga boqortooyada, by xoogga xoogga iyo ammaanta lahayd oo aan ku heer sare?"
4:28 Oo intii erayada weli joogay boqorka afkiisii, cod jarka hoos bay samada ka, "Idinka, O Boqor Nebukadnesar, waxaa la sheegay in: "Boqortooyadaadu waa la qaadi doonaa kaa Jeedsan,
4:29 oo iyana ay idin saari doonaan oo dadka laga dhex, oo aad la joogi xayawaanka iyo dugaagga duurka u noqon doonaa. Waxaad cuni doonaa hay sida dibi oo kale, oo toddoba goor kiin kor mari doonaa, ilaa aad ogtahay in Sare One taliyaa in boqortooyada dadka, oo wuxuu ku siiyo ku alla kii uu doonana. ' "
4:30 Oo isla saacaddiiba, xukun la dheceen Nebukadnesar, oo wuu eryay oo dadka laga dhex, oo wuxuu cunay hay sida dibi oo kale, oo meydkiisiina waxaa lagu soo Daadiyey leh sayaxa samada, ilaa ay timihiisii ​​u kordhay sida baadad of gorgorraduna, ciddiyihiisiina sida kuwa ka mid ah shimbiraha.
4:31 Sidaa darteed, dhamaadka maalmahan, Waxaan, Nebukadnesar, indhahayga kor u qaaday xagga samada, iyo maankayga bogsatay ii. Markaasaan ku mahad naqay Ka ugu Sarreeyaa u, waanan ammaanay oo isaga kan weligiis nool ammaanay. Waayo, xooggiisa, waa u xoogga weligiis ah, iyo boqortooyadiisa waa ka ab ka ab.
4:32 Oo deggan oo dhan, oo dhulka lama simna, siduu isaga ka hor. Waayo, isagu wuxuu u dhaqmo siduu doono u gaar ah, iyadoo dadka dhulka deggan oo ah sida la deggan quduuska ah oo samada ka. Oo ninna ma jiro oo gacantiisii ​​iska caabin ah kartaa, ama waxaad isaga ku, "Waa maxay sababta aad waxan ku samaysay!?"
4:33 Isla mar ahaantaana, maankayga ii soo laabtay, iyo intaan imid ka ciso, iyo ammaan leh ee boqortooyadayda. Oo muuqaalka dib ii siiyey. Oo kuwii gobta ahaa oo xaakinnadiina iga baahan yahay. Oo waxaan soo celiyey boqortooyadayda, iyo haybad weyn ayaa lagu daray ii.
4:34 Sidaas daraaddeed waxaan, Nebukadnesar, hadda ammaani, iyo weynayn, iyo ammaani Boqorka samada, maxaa yeelay, shuqulladiisa oo dhan iyo xukummadii uu jidkiisa waa run, iyo kuwa u bax oo iskibrin, inuu awoodo inuu keeno hooseeyo.
5:1 Beelshaasar, boqorka, diyaafad weyn buu sameeyey, waayo, kun oo ka mid ah saraakiishiisa oo, iyo mid kasta oo iyaga ka mid ah cabbeen sida ay da'diisa.
5:2 Oo sidaas daraaddeed, markii ay soo cabteen, ka baray in weelashii ahaa dahabka iyo lacagta loo keeno,, oo Nebukadnesar, aabbihiis, uu u kaxaystay macbudka ka, Yeruusaalem ku tiil, si ay boqorka, iyo saraakiishiisa oo, oo naagihiisiina, iyo naagihii addoommaha, ay wax ku cabbaan.
5:3 Markaas weelashii dahabka iyo lacagta ah waxaa lagu soo bandhigay, oo uu soo kaxaystay macbudka ka kuwaas oo ku jiray Yeruusaalem, iyo boqorkii, iyo saraakiishiisa oo, Haweenkooda, oo naagood oo addoommo ah, ay wax ku cabbeen.
5:4 Khamri bay cabbeen, way ammaaneen ilaahyadii dahabka, oo ay, iyo lacag, naxaasta, iron, iyo qoryaha, iyo dhagaxa.
5:5 Isla saacaddaas, ayaa waxaa u muuqday faraha, sidii gacanta nin, qoraal ah oo korka ka mid ah derbigii, soo horjeeda laambadda, in hoyga boqorka. Markaasaa boqorkii wuxuu ku arkay gacantii inteedii wax qortay.
5:6 Markaasaa boqorka wejigiisii ​​beddelmay, fikirradiisiina wuu la soo dhibtay, oo uu waayay is-xakamaynta, iyo jilbo joogay isagoo reebtay mid kale oo ka dhan ah.
5:7 Markaasaa boqorkii wuxuu ku qayliyey qaylo ah si ay u keena xiddigiyayaasha, Kaldayiin, iyo kuwa wax sheega. Markaasaa boqorkii wuxuu la hadlay nimankii xigmadda lahaa oo Baabuloon naadiyey, oo wuxuu ku yidhi, "Ku alla kii akhriyi doonaa qoraal iyo fasirkii ii caddeeyaan fasirkeeda guduudan xidhan doonaa, oo waxay yeelan doonaan silsilad dahab ah ee uu qoorta, oo noqon doona kan seddexaad ee boqortooyadayda. "
5:8 Markaasuu, ee u yimid nin kasta oo xigmad boqorka, laakiin waxay waayeen innaba farta akhriyi, midna muujin fasirkii riyadaada, boqorow ah.
5:9 Sidaa darteed, Boqor Beelshaasar ayaa ahayd arrin wareersan, iyo araggii wejigiisa ayaa si, iyo xataa kuwii gobta ahaa waxaa lagu soo dhibtay.
5:10 Laakiinse boqoraddii, sababtoo ah wixii dhacay, si ay boqorka iyo saraakiishiisa oo, waxay gashay gurigii diyaafadda. Oo iyana waxay ka hadlay, oo wuxuu ku yidhi, "Boqorow, weligiis wuu noolaan. Ha u ogolaan fikirkaaga aad iskaga qasnee, oo innaba waa wejigaaga loo beddelin.
5:11 Waxaa jira nin ee boqortooyadaada, kuwaas oo uu leeyahay, ruuxii ilaahyada quduuska ah ayaa isku, iyo wakhtigii aabbahaa, aqoon iyo xigmad ayaa waxaa laga helay in. Wixii Boqor Nebukadnesar, Aabbahaa, Hogaamiyaha ballamay ee xiddigiyayaasha, xiddigiyayaashii, Kaldayiin, iyo kuwa wax sheega, xataa aabbahaa, Waxaan idinku leeyahay,, Boqorow.
5:12 Waayo, ruuxaan weyn, oo soo beegtay, iyo faham, iyo fasiraadda riyooyin, iyo muujinta qarsoon, iyo xal u ah dhibaatooyinka ayaa waxaa laga helay in, in uu yahay, in Daniel, in boqorku ku siiyey magaca Beelteshaasar. Hadda, oo sidaas daraaddeed, Daanyeel ha loo yeeray, oo wuxuu sharxi doonnaa fasirkeedii. "
5:13 Markaasaa Daanyeel la keenay boqorka hortiisa. Markaasaa boqorkii wuxuu la hadlay isagii, oo wuxuu ku yidhi, "Ma waxaad tahay Daniel, oo ahaa reer maxaabiistii dadka Yahuudah,, Kan aabbihiis boqorka soo bixiyey Yahuudiya?
5:14 Anigu waan maqlay oo idinka mid ah, in aad haysato ruuxa ilaahyadu, iyo in aqoon weyn, iyo sidoo kale waxgarasho iyo xigmad, ayaa lagu helay in aad.
5:15 Oo haddaba xiddigayaqaannada xigmad lahu ay galeen hortayda, si ay u fartan akhriyaan iyo in ay soo bandhigaan ay ii caddeeyaan fasirkeeda. Oo way kari waayeen inay ii sheeg macnaha qoraalka this.
5:16 Intaas waxaa sii dheer, Anigu waan maqlay adiga kugu saabsan in aad fasiri kartid wax dahsoon iyo xalinta dhibaatooyinka. Sidaas daraaddeed, hadii aad ku najaxdo akhriska qoraal ah, iyo in daaha ka fasirkiisa, aad loo gelinayaa dhar guduudan doonaan, oo waxaad yeelan doontaa silsilad dahab ah oo qoorta kuugu jirta, oo waxaad noqon doontaa hogaamiyaha saddexaad ee boqortooyadayda. "
5:17 Si taas loo Daniel jawaab ka bixisay hadalka si toos ah boqorka, "Abaal marin ahaan naftaada waa in, iyo hadiyado aad guriga laga yaabaa in aad siiso kale, laakiin waan kuu akhriyi doonaa inaad qoraal ah, Boqorow, oo aan kuugu muuqan fasirkiisa in.
5:18 Boqorow, Ilaaha ugu Sarreeyaa wuxuu siiyey Nebukadnesar, Aabbahaa, boqortooyo iyo weynaanta, ammaan iyo murwad.
5:19 Iyo sababta oo ah weynaanta ayuu siiyey isaga inay, dadyowga oo dhan, qabiilooyinka, iyo kuwa kala afka gariireen, oo waxay ka baqeen isaga of. Ku alla kii uu u rajeeyay, wuxuu laayay; oo ku alla kii uu u rajeeyay, uu baabbi'iyey; oo ku alla kii uu u rajeeyay, ayuu sarraysiiyey; oo ku alla kii uu u rajeeyay, ayuu hoos u.
5:20 Laakiin marka uu qalbigiisa ayaa kibray oo ruuxiisu waa sii qallafiyey oo iskibrin, uu kaga dejiyey carshigiisii ​​ka yimid carshiga boqortooyadiisa iyo ammaantiisa laga qaaday.
5:21 Oo isagii waxaa lagu eryey binu-aadmiga ka, iyo si uu qalbigiisa la saaray la jirto xayawaanka ku, oo wuxuuna la joogay dameeraha duurka, oo wuxuu cunay hay sida dibi oo kale, oo meydkiisiina waxaa lagu soo Daadiyey leh sayaxa samada, ilaa uu ogaaday in Ilaaha ugu wada sarreeyaa uu haystaa amar ay boqortooyada dadka, iyo in ku alla kii uu doonayo, ayuu ka sarraysiin doonaa waxa ka badan.
5:22 Sidoo kale, aad, wiilkiisii ​​Beelshaasar, qalbigaagana waxaad u isma ay hoosaysiin, In kastoo waxyaalahaas oo dhan waad ogayd.
5:23 Laakiin waxaad waad iska sarraysiisay Sayidka samada. Oo weelashii gurigiisa lagu soo bandhigay in aad ka hor. Oo waa inaad, iyo kuwii gobta ahaa aad, iyo naagahaaga,, iyo naagahaaga addoommaha ah, aad khamri ku cabteen ka. Sidoo kale, waxaad ammaantay ilaahyada lacagta, iyo dahab, iyo naxaas, iron, iyo qoryaha, iyo dhagaxa, oo aan waxba arag, maqlin, mana dareemi, weliba ma aadan Ilaah ammaanay oo ku haysta neefta oo jidadkaaga oo dhan wuxuu gacanta ku.
5:24 Sidaa darteed, uu soo diray qayb ka mid ah gacanta, kaas oo uu ku qoran this, kaas oo lagu Isasaaray.
5:25 Laakiin tani waa qoraal ah oo uu soo Xukumay: Mane, THECEL, Laydhkaaga.
5:26 Oo kanu waa fasiraadda erayada. Mane: Ilaah waa tiriyey boqortooyadaada, waxaana uu u dhammeeyey.
5:27 THECEL: aad ayaa la miisaamay kafado dul saaran oo laga helay maqnaato.
5:28 Laydhkaaga: boqortooyadaada ayaa kala qaybsan oo la siiyey reer Maaday iyo reer Faaris.
5:29 Markaasuu, by boqorka amarkiisa, Daniel ayaa la labbisto dhar guduudan, iyo silsilad dahab ah la saaray luqunta, oo isaga waxaa la naadiyey inuu awood qabtay sida saddexaad oo boqortooyada.
5:30 Habeen kaas la mid ah, Boqor Beelshaasar reer Kaldayiin la dilay.
5:31 Oo Daariyus oo reer Maaday guulaysteen in ay boqortooyada, at da'da laba iyo lixdan sannadood.
6:1 Daariyus waxaa la wanaagsanaa, iyo si uu boqortooyada u magacaabay mid ka mid boqol iyo labaatan taliyayaasha, in laga dhigo boqortooyadiisa oo dhan.
6:2 Oo kuwanu, saddexda hoggaamiye, kii Daanyeel ka mid ahaa, si taliyayaashii noqon lahaa xisaabtamo iyaga iyo boqorka lahaa dhib lahayn.
6:3 Oo sidaas daraaddeed Daniel si fiican kor ku xusan oo dhan madaxda iyo taliyayaashii, waayo, ruuxaan weyn ee Ilaah ku jirto.
6:4 Intaas waxaa sii dheer, boqorka loo arkaa isaga dejinta boqortooyada oo dhan; oo korkoodana waxaa madaxda iyo saraakiishii doonay inuu soo helo cabashada ka dhanka ah Daniel iyo nimco boqorka. Oo iyana waxay ka heli kartaa jirin, ama xitaa shaki, maxaa yeelay, isagu wuxuu ahaa aamin, iyo eed kuma ama shaki isaga laga helayba.
6:5 Sidaa darteed, nimankan ayaa sheegay in, "Ma heli doonaan cabasho kasta oo ka dhan ah Daniel this, haddii aan waa sharciga ku saabsan Ilaahiisa ah ka gees ah. "
6:6 Markaas madaxda iyo taliyayaashii boqorka qaaday leexday oo gooni oo isagii la hadlay hab this: "Boqor Daariyus, weligiis wuu noolaan.
6:7 Dhammaan madaxda boqortooyadaada, denbiyada yar yar iyo taliyayaashii, ee guurtida iyo xaakinno, leeyihiin tashaday in amar ah Imperial iyo naadadiisii ​​waa in la daabacay, si ay dadka weydiin codsi kasta oo ilaah kale ama nin iyo soddon maalmood oo dhan, adiga mooyaane, Boqorow, waxaa lagu dhex tuuri doonaa bohoshii libaaxyada.
6:8 Hadda, oo sidaas daraaddeed, Boqorow, xaqiijin xukun iyo qori Amarkii, sidaas daraaddeed waxa la aasaasay by Maaday iyo reer Faaris laga yaabaa in aan loo beddelin, ama nin kasta waxaa loo ogolaan doonaa in ay ku xadgudubtaan. "
6:9 Oo sidaas daraaddeed Boqor Daariyus u soo bixiyey amar, oo waxaa la aasaasay.
6:10 Haddaba markii Daniel bartay of this, kuwaas oo, in sharciga la aasaasay, gurigiisa uu soo galay, iyo, furitaanka daaqadaha in qolkiisii ​​sare jeeday xagga Yeruusaalem, wuuna jilba joogsaday saddex jeer maalintii, oo wuxuu caabuday oo mahad ka hor inta uu Ilaah siiyey, sida uu la caadaysteen in ay hore u samayn.
6:11 Sidaa darteed, nimankan, weeydiin aad u, ogaadeen in Daniel tukanayay iyo baryootankan samaynta inuu Ilaah.
6:12 Oo iyana waxay ku soo dhawaaday iyo boqorkii la hadashay oo ku saabsan Ogaysiiskani ku. "Boqorow, wixii aad ku samaysay ma amar in nin kasta oo ka dhigaysa codsi ah in mid ka mid ah ilaahyada ama rag intii soddon maalmood ah, marka laga reebo in ay naftaada, Boqorow, waxaa lagu tuuri lahaa rido bohosha libaaxyada?"Si taas oo boqorkii ku jawaabay, oo wuxuu ku yidhi, "Xukunka waa run, iyo si waafaqsan amarkan reer Maaday iyo reer Faaris, aan xalaal ahayn in ay ku xad. "
6:13 Markaasay jawaabeen oo waxay boqorkii ka hor ayaa sheegay in, "Daniel, oo ahaa reer maxaabiistii dadka Yahuudah,, aan ka walaacsan aad sharciga ku saabsan, hana ku saabsan amar ah in aad samayso, laakiin saddex jeer maalintii uu tukanayo baryootankayga. "
6:14 Haddaba markii boqorkii hadalladaas maqleen, uu aad bay u calool, iyo, oo ku hadlaya magaca Daniel, ayuu qalbiga ka dhigay inay isaga oo lacag la'aan ah, oo uu ku hawshooday ilaa qorrax dhaca inuu isaga badbaadiyo.
6:15 Laakiin nimankan, og boqorka, wuxuu ku yidhi isagii, "Waad ogtahay, Boqorow, inay sharci reer Maaday iyo reer Faaris waa in amar kasta oo boqorka ayaa aasaasay laga yaabaa in aan loo beddelin. "
6:16 Markaasaa boqorkii wuxuu amray, oo waxay u keeneen Daniel iyo isaga rido bohosha libaaxyada tuuray. Markaasaa boqorkii Daanyeel ku yidhi, "Your Ilaah, kan aad had iyo jeer u adeega, isaga qudhiisuse wuxuu aad lacag la'aan doono. "
6:17 Markaasaa dhagax la keenay, oo taas waxaa loo yeellay bohoshii afkeedii ah, taasoo uu Boqor shaabadeeyey kaatunkiisii ​​u gaar ah, iyo giraanta ah saraakiishiisa oo, si aan ninna u dhaqmaan lahaa Daanyeel ku dacweeyaan.
6:18 Markaasaa boqorkii ka tegey gurigiisii ​​galay, oo wuxuu u kacay sariirta iyada oo aan wax cunaya, iyo cuntada aan la isaga hor, Oo weliba, xitaa hurdada ayay ka carareen.
6:19 Markaasaa boqorkii wuxuu, qudhiisa kacdid at iftiinka ugu horeysay, si deg deg ah u baxay inuu bohoshii libaaxyada.
6:20 Oo ku imanaya dhowaaday bohoshii, ayuu ku qayliyey in ay Daniel cod oohin oo isagii la hadlay. "Daniel, anoo addoonkaaga ah Ilaaha nool, Ilaahiinna ah, kan aad had iyo jeer u adeega, samayn aad aaminsan tahay waxa uu ku guulaystay inuu aad lacag la'aan ah libaaxyada?"
6:21 iyo Daniel, boqorkii u jawaabay oo, sheegay, "Boqorow, weligiis wuu noolaan.
6:22 Ilaahay malaa'igtiisii ​​u soo diray, oo uu xiray oo afafka libaaxyada, oo iyagu ma ay i soo gaartay, maxaa yeelay, isaga hor caddaaladda ayaa iga heleen, iyo, xitaa aad ka hor, Boqorow, Waxaan galay dambi lahayn. "
6:23 Markaasaa boqorkii wuxuu ahaa aad iyo aad isaga u farxeen, oo wuxuu ku amray in Daanyeel waa la qaadi bohosha laga soo bixiyo. Iyo Daanyeel bohoshii looga soo bixiyey ee, iyo boogta ma isaga laga helayba, maxaa yeelay, wuxuu rumaysan yahay in uu Ilaah.
6:24 Waxaa intaa dheer, amarka boqorka, Nimankaas loo keenay, kuwaas oo lagu eedeeyay in Daniel, oo waxaa lagu dhex tuuray bohoshii libaaxyada ', ay, iyo wiilashoodii, oo naagahoodii, oo iyana shuqulkii ma ay gaaraan hoose ee bohoshii libaaxyada hor Qabtay burburiyo lafahoodii oo dhan.
6:25 Markaasaa boqorkii Daariyus warqado u qoray dadyowgii oo dhan, qabiilooyinka, iyo kuwa kala afka deggan dalka oo dhan. "Nabad laga yaabaa in la kordhiyo aad la.
6:26 Waxaa halkan ku cad wareegtada aan in, oo dhan my boqortooyadii iyo boqortooyadayda, bilaabi doonaan inay gariiraan oo ka cabsadaan Ilaaha Daanyeel. Waayo, isagu waa Ilaaha nool oo weligeed weligeedba, iyo boqortooyadiisa doonaa mid aan la baabbi'in, iyo xooggiisa weligiis socon doono.
6:27 Eebana waa liberator iyo badbaadiyaha, performing calaamooyin iyo yaabab ku Sugan Samada iyo Dhulka,, ayaa sii daayay Daniel ka bohoshii libaaxyada. "
6:28 Intaas ka dib, Daanyeelna waa sii joogay iyada oo boqornimadii Daariyus kii ilaa boqornimadii Cyrus, reer Faaris ahaa.
7:1 In sannaddii kowaad oo ahaa Beelshaasar,, oo ahaa boqorkii Baabuloon, Daniel arkay riyo iyo aragti in madaxiisa uu sariirtiisii ​​ku. Markaasay, qoraal hoos riyadii, isagu waa inuu fahamsan yahay in si kooban, oo sidaas, waxaa soo koobaya tersely, ayuu yiri:
7:2 Waxaan arkay riyadaydii habeenkii, oo bal eeg, afarta dabaylood oo samada, oo badda weyn ku la diriray.
7:3 Afar bahal oo waaweyn, kala duwan oo ka mid kale, wuxuu ka badda.
7:4 Kowaad wuxuu u ekaa libaax oo lahaa baal oo gorgor ah. Waxaan daawadey sida baalashiisii ​​laga rifay,, oo taasna waxaa lagu sara kiciyey kuwii dhulka oo cagahay ku istaageen, oo ay u eg tahay nin, iyo nin qalbigiisu nin kale ah la siiyey.
7:5 Oo bal eeg, bahal kale, sida orso, istaageen in ay hal dhinac, oo waxaa joogay saddex saf in ay afka iyo ilkaha ay, oo waxay la hadleen, waxa uu sidan: "Kac, oo dad badan cun. "
7:6 Taas ka dib, Waxaan daawaday, oo bal eeg, kale oo shabeel u eg, oo wuxuu lahaa inaan baalal yeesho sida shimbir, afar waxay dushiisii, iyo afar madax ahaayeen on bahalkii, iyo awood la siiyey.
7:7 Taas ka dib, Waxaan daawaday la arko ee habeenka, oo bal eeg, bahalkii afraad, laga cabsado weli yaabka, oo aad iyo aad u xoog badan; wuxuu lahaa ilko waaweyn oo bir ah, cunista weli burburiyo, oo ku tuman hoos ka dhiman cagihiisa iyadoo, laakiin waxa uu ka duwan xayawaanka kale, oo aan arkay ka hor, oo wuxuu lahaa toban gees.
7:8 Waxaan ka fiirsaday geesihii, oo bal eeg, gees kale oo yar baxay dhexdooda. Oo waxaa ka ruqay saddex gees oo kuwii hore kaga rujiyey ay joogaan. Oo bal eeg, indho u eg indho dad ahaayeen geeskaas waxaa ku, iyo af ku hadlaya waxyaalo aan dabiici ahayn.
7:9 Waxaan daawaday ilaa carshiyo meel la dhigay ilaa, oo uu kii da'da weynaa fadhiistay. Isaga oo dharkiisu wuxuu u nuuri sida baraf, oo timaha madaxiisuna sida suuf nadiif ah; carshigiisu wuxuu ahaa olol dab ah, giraangirood oo ay la dab lagu shiday.
7:10 Webiga A oo dab ka soo yaaceen hortiisa. Kumanaan ku kor u adeegayay kumaan kun si ay, iyo toban kun oo min boqolaal kun oo ka qeyb galay isaga hor. Maxkamad ku bilaabay, kitaabbadiina waa la furay.
7:11 Waxaan daawaday, maxaa yeelay, codkii hadallada waaweynaa oo geesku in uu ku hadlayay, oo waxaan arkay in bahalkii oo la baabi'iyay, oo ay meydkiisii ​​loo Halaagsamay oo ay ku wareejisay in la gubay.
7:12 Sidoo kale, xoogga xayawaanka kale lagu sii qaaday, iyo waqti xaddidan nolosha loo magacaabay iyaga, ilaa hal mar oo kale.
7:13 Waxaan daawaday, oo sidaas daraaddeed, la arko ee habeenka, oo bal eeg, la daruuraha cirka, mid u eg wiilkii aadan nin yimid, oo uu soo dhawaaday jidka oo dhan si uu kii da'da weynaa, oo isaga ka hor inta aysan soo bandhigay.
7:14 Oo wuxuu isaga siiyey awood, iyo sharaf, iyo boqortooyada, Dadyowga oo dhammu iyo, qabiilooyinka, iyo kuwa kala afka isagay u adeegi doonaan. Oo xooggiisa waa awood weligeed ah, taas oo aan laga qaadi doonin iska, iyo boqortooyadiisa, mid ka mid ah oo aan la kharribeen.
7:15 Ruuxaygii ka argagaxay. Waxaan, Daniel, ahaa cabsi at waxyaalahan, oo waxyaalihii lay tusayna, way iga soo dhibtay.
7:16 Waxaan soo dhawaaday mid ka mid ah midiidinyadii oo run waa weyddiiyey oo ka waxyaalahan oo dhan ku saabsan. Wuxuu ii sheegay fasiraadda erayada, oo wuxuu iiga digay:
7:17 "Kuwani afar bahal oo waaweyn waa afar boqortooyo, taas oo ka soo sara kacaan dhulka.
7:18 Haddana waa quduusiinta Ka Ilaaha ugu sarreeya, oo boqortooyada qaadan doonta, iyo boqortooyada ay ku qaban doonaa qarnigan ka, iyo weligiis iyo weligiisba. "
7:19 Taas ka dib, Waxaan doonayay in ay bartaan dadaal ku saabsan bahalkii afraad, kaas oo aad u kala duwan oo ka dhan ahaa, oo aad iyo aad looga cabsado; ilkaha oo haadeed birta ahaayeen; buuna cunay oo burbura, oo inta ka dhiman uu ku tuntay cagihiisa iyadoo;
7:20 iyo tobankii gees oo ku saabsan, oo uu lahaa, oo waxaa madaxa, oo ku saabsan ka kale, kuwaas oo soo baxay, hortiisa ay saddexdu ka gees oo u dhacay, oo ku saabsan kaasu waa geeskii indhaha lahaa, iyo af ku hadlaya waxyaalo waaweyn, oo kaasu wuxuu ahaa ka xoog badan inta kale.
7:21 Waxaan daawaday, oo bal eeg, geeskii dagaal ka dhan ah kuwa quduuska ah oo iyaga ka adkaaday,
7:22 ilaa uu kii da'da weynaa yimid, oo wuxuu xukunka u dhiibay kuwa quduuska ah ee One Sare, oo markii ugu yimid, iyo kuwa quduuska ah ka helay boqortooyada.
7:23 Oo sidan ayuu yiri, "Bahalka afraad wuxuu boqortooyada afraadna waxay dhulka ku noqon doonaa, kaas oo noqon doona weyn boqortooyooyinka kale oo dhan ka badan, oo wuxuu wada laasan doonaa dhulka oo dhan, oo ku tuman doontaa, oo burburin.
7:24 Waxaa intaa dheer, Oo tobankii gees oo boqortooyadii isku noqon doonaa toban boqor,, oo mid kalaa kici doona iyaga ka dib, oo wuxuu ahaan doonaa idinka xoog badan kuwa isaga ka hor, oo wuxuu soo bixin doonaa saddex boqor.
7:25 Oo isna wuxuu ku hadli doonaa erayo ka mid ah Sare, iyo waxa gabaabsi noqon doona kuwa quduuska ah Ka ugu Sarreeya, oo wuxuu ku fikiri doonaa oo ku saabsan waxa ku qaadan lahaa inuu beddelo wakhtiyada iyo sharciyada, oo la siin doono ayuu gacanta u geliyey ilaa wakhti, iyo jeer, iyo wakhtiga nus.
7:26 Iyo Fidmo bilaabi doonaan, si uu awood lagu qaaday, iyo in la burburiyo, oo waxay noqon cuslaa oo dhan habka ay u dhamaadka.
7:27 Oo weliba boqortooyada, iyo xoogga, iyo weynaanta boqortooyooyinka in, taas oo ka yar yahay samada oo dhammuna, waxaa la siin doonaa dadka kuwa quduuska ah ee Ilaaha ugu sarreeya, Boqortooyadiisu waa boqortooyo weligeed jiraysa, iyo xataa boqorradoodii oo dhan u adeegi doonaa oo ay isaga u addeecaan. "
7:28 Oo halkan waa dhammaadka wakhtigii fariinta. Waxaan, Daniel, waxaa si weyn u dhibtay fikirradayda by, iyo niyadda waa beddelmay ee, laakiin waxaan sii raagayaan fariinta qalbigayga.
8:1 Sannaddii saddexaad oo boqornimadii Boqor Beelshaasar wuxuu, ayaa riyo ii muuqatay. Ka dib wixii aan ku arkay iyo bilowgii, Waxaan, Daniel,
8:2 arkay riyadaydii, in waxaan joogay magaalada caasimada ahayd hoygii boqorka ka, taas oo ah gobolka Ceelaam, weli waxaan ku arkay waxyaalihii aan iridda ka Uulay ahaa.
8:3 Oo indhahaygii baan kor u taagay oo wuxuu arkay, oo bal eeg, hal wan ka hor dhiiqo istaagay, oo labada gees lahaa sare, oo mid baa ka dheeraa midka kale; oo sii kordhaya sare weli.
8:4 Taas ka dib, Oo waxaan arkay wankii bast uu mariyaa geesaha meesha dhanka ah reer galbeedka, iyo Waqooyiga, iyo Meridian ee, iyo xoolahooda oo dhan isma hor taagi kari waayeen, mana la sii daayay gacantiisa ka, oo wuxuu wada yeelay sidii doonistiisu, oo wuxuu noqday weyn.
8:5 Oo waxaan fahmay, oo bal eeg, waa inuu orgi ka mid ah ayay orgi ka West u yimid kor ku yaal dhulka dushiisa oo dhan, oo isagu ma uu taaban dhulka. Intaas waxaa sii dheer, orgiguna wuxuu ku lahaa gees weyn fahan ahaan indhood dhexdooda.
8:6 Oo wuxuu raacay jidkii oo dhan u yimid wankii lahaa geesihii, oo aan la arki iridda hor taagan, oo wuxuu ku orday xaggiisa in ciidanka uu xoog.
8:7 Oo markuu u soo dhowaaday meel u dhow u yimid wankii, aad buu ugu xanaaqay isaga ka gees ah, oo wuu ku dhuftay wanka, iyo laba gees kala jejebiyey, iyo wan isma hor taagi kari waayeen, iyo markuu soo Dejiyo dhulka ku tuuray, wuxuu isagii ku tuntay, oo ninna ma uu karin inuu wanka gacantiisa ka oo lacag la'aan ah.
8:8 Laakiinse waa inuu orgi ka mid ah ayay orgi noqday iyo aad u weyn, oo goortuu ku liibaanay, ayaa geeskii weynaa ka Ahaysiinay, oo afar gees ah ayaa kacay waxa ay dureeri by hab ka mid ah afartii dabaylood oo samada,.
8:9 Laakiin mid ka mid ah u soo baxay mid ka mid ah geeska yar, oo waxay noqotay weyn Meridian ee, iyo Bariga, iyo xoogga.
8:10 Oo waxaa sii xoog weynaaday xagga xoogga samada, oo waxay ku tuureen kuwa xoogga iyo xiddigihii, oo isna wuu ku tuntay.
8:11 Oo waxaa la weyneeyey, iyo tan iyo hoggaamiyaha xoogga, oo iska isaga allabari oo joogtada ah ka qaaday, iyo hoos baa loo tuuray oo meeshiisii ​​quduuska ah.
8:12 Oo faa'iido ah waxaa isagii la siiyey iyo qurbaankii joogtada ah, maxaa yeelay, waxay ahayd dembiyadii, iyo runta ku dhuftay doonaa dhulkuu ku tuuray,, oo wuxuu u shaqeyn doonaa, wuuna iska barwaaqoobi doonaa.
8:13 Oo haddana waxaan maqlay mid ka mid ah kuwa quduus ah oo hadlaya, iyo mid quduus ah mid kale ku yidhi, (Anigu garan maayo kan uu la hadlayo,) "Waa maxay heerka uu tusay, iyo allabari oo joogtada ah, oo dembiga ka baabbi'inta, kaas oo dhacay, iyo meesha quduuska ah iyo xoogga, taas oo ku tuman doonaan?"
8:14 Oo isna wuxuu ku yidhi isagii, "Laga soo bilaabo fiidkii ilamaa subaxdii, laba kun iyo saddex boqol maalmood, iyo si meesha quduuska ah waa la nadiifin doonaa. "
8:15 Laakiin waxay noqotay, markaan, Daniel, tusay arkay oo wuxuu damcay waxgarashada, bal eeg, oo halkaas isla taagay hortiisa aan wax u eg nin u eg a.
8:16 Oo haddana waxaan maqlay nin codkiis a gudahood Uulay, oo uu ka soo yeedhay oo ku yidhi, "Gabriel, kayeel mid riyada. "
8:17 Oo isna wuu yimid oo isdhex taagay soo socota si ay meesha aan taagan, oo markii uu soo dhawaaday, Aniguna wejigaan u dhacay, gariir, oo wuxuu igu yidhi, "Faham, Wiilka Aadamow, waayo, wakhtiga ugu dambaysta aragtida la oofin doono. "
8:18 Oo markuu ila hadlay, hore baan u dhacay gal dhulka, oo sidaas isagii baa i taabtay oo i sara istaagay.
8:19 Oo isna wuxuu igu yidhi, "Waxaan muujin doonaa inaad waxa waxyaalaha mustaqbalka waa in dhibaatadii hore, markii ugu leeyahay dhamaadka.
8:20 wankii, oo aad ku aragtay in ay geesihii, Kanu waa boqorkii dalka Maaday iyo reer Faaris.
8:21 Intaas waxaa sii dheer, orgiguna wuxuu labada ka mid ah ayay orgi waa boqorka dalka Gariigta ah, oo geeskii weynaa oo, taas oo ahayd indhood dhexdooda, waa mid la mid ah, boqorka kowaad.
8:22 Oo tan iyo, iyagoo ah kuwii lagu Ahaysiinay, waxaa koray afar in ay meel, afar boqor oo dadkiisa u soo kici doonaa, laakiin ma aha in uu xoog.
8:23 Oo ka dib markii ay boqornimadii, marka xumaatooyinkii la kordhin doonaa, waxaa kici doona boqor wejigiisa laga ceeb la'aan iyo fahamka wadaxaajoodka.
8:24 Oo faa'iido u xoogaysan doonaan, laakiinse ma aha xagga isaga oo nooca ciidamada, oo aan ka ahayn wixii uu awoodo in uu ku kalsoon tahay waxay noqon doontaa, wax walba waa la tirtiri doonaa, wuuna iska barwaaqoobi doonaa, oo wuxuu u shaqeyn doonaa. Oo isna wuxuu ku soo dejin doonaa guul iyo dadka quduusiinta,
8:25 siduu doono, iyo khiyaano waxa hagi doona inuu gacanta by. Oo qalbigiisuna la badbadiyay doonaa, iyo tiro badan oo ka mid ah wax walba oo uu ku dili doonaa badan, oo wuxuu ku kici doonaan Sayidka sayidyada,, oo isna waa la reebtay doonaa gacanta oo aan.
8:26 Oo riyo oo ka mid ah fiid iyo subax,, kaas oo la sheegay, waa run. Sidaa darteed, waa in aad xir riyada ku, maxaa yeelay,, maalmo badan ka dib, waxa dhici doona. "
8:27 Iyo aniga, Daniel, qallashaa, oo waxaa lagu buka maalmo qaar ka mid ah, iyo markii aan aan aad u farxay, Waxaan sameeyaa shuqullada boqorka ee, oo waan la yaabay riyadii, oo lamana arag mid fasiri kari waayay.
9:1 Sannaddii kowaad oo Daariyus kii, kii ahaa ina Ahashwerus, farcanka reer Maaday, oo u talin jiray boqortooyadii reer Kaldayiin,
9:2 in hal sano oo boqornimadiisa, Waxaan, Daniel, fahamsan yahay in buugaagta tirada sano ah, ku saabsan erayga Rabbiga oo u yimid Yeremyaah, Nebi, in hallaynteedu Yeruusaalem la dhameystiro doono toddobaatan sannadood.
9:3 Oo waxaan wejigayga u jeediyey Sayidka dhigay, Ilaahayow, si aad u weydiiso oo baryaan soon, iyo dhar joonyad ah, iyo dambas.
9:4 Oo waxaan Rabbiga u baryay, Ilaahayow, oo waxaan qirtay, oo waxaan idhi, "Waxaan idinka baryayaa, Rabbiyow, Ilaaha, weyn oo laga cabsado, Dhawrista axdigii iyo Naxariis u ah kuwa aad u jecel oo amarradiisa xajisaan aad.
9:5 Waannu dembaabnay, Xumaanna waannu samaynay, waxaan impiously u dhaqmeen iyo ku noqday, oo aan ka leexdeen amarradaada iyo sidoo kale xukummadaada ka noqotay.
9:6 Waxaan ma aydaan addeecin addoommadaada, nebiyada oo, kuwaas oo ku hadlay magacaaga annaga iyo boqorradayada, madaxda, awowayaasheen, iyo dadka dalka deggan oo dhan.
9:7 in aad, Rabbiyow, waa caddaalad, laakiin noo yahay wareeriyaan, sida ay tahay maanta waayo, raggii reer Yahuudah, iyo dadkii Yeruusaalem degganaa oo, oo reer binu Israa'iil oo dhan, kuwa dhow iyo kuwa fog, Dalalkii oo dhanna ah oo aad u kexeeyey, xumaatooyinkooda aawadood by kaas oo ay kugu dembaabaan,.
9:8 Rabbiyow, na waxaa u Sugnaaday wareeriyaan: annaga iyo boqorradayada, madaxda, iyo Aabayaalkanno, Kii dembaabay.
9:9 Laakiin si aad u, Sayidka Ilaahayaga, waa naxariis iyo kafaaraggud, waayo, waannu soo noqday waxaad ka,
9:10 oo aan innaba ma aydaan dhegaysan codka Rabbiga, Ilaaheenna, si ay u sharcigiisii ​​ku socdaan, oo wuxuu ku dhisay noo by addoommadiisii, nebiyada oo.
9:11 Oo reer binu Israa'iil oo dhan ayaa ku xadgudbeen aad sharciga iyo way iga rogmatay, ma dhageysto codkaaga, oo sidaas oo kale ayaa xukun iyo inkaarta, oo waxa ku qoran kitaabkii Muuse, addoonkii Ilaah, ayaa ku soo Daadinay noo saarnayd,, maxaa yeelay, waannu dembaabnay isaga ka gees ah.
9:12 Oo isna wuxuu erayadii uu oofiyey, wixii uu kaga hadlay noo taliya iyo in ka badan madaxda yaa na xukumi jiray, in uu keeni doono inuu inoo taliyana xumaan weyn, sida ayaa ka hor inta uusan marnaba jiray hoos samada oo dhammuna, sida laga soo xigtay waxa lagu sameeyey Yeruusaalem.
9:13 Just sidii loo qoran sharciga Muuse, belaayadan oo dhan taas waxa noo yimid oo ku dul, mana furaynno waxaan kaa baryi doonaan wajiga, Rabbiyow, Ilaahayagow, si aan dib ugu soo xumaatooyinkayagii aawadood noqdaan oo ka fiirso runtaada.
9:14 Markaasaa Rabbigu wuxuu dhawri ka badan kuwa xun iyo kuwa ayaa u horseeday inuu inoo taliyana; Rabbiga, Ilaaheenna, waa kaliya in shuqulladiisa oo dhan, taas oo uu ku dhammaado, waayo, annagu ma ay dhegaysan codkiisa.
9:15 Haddaba, Rabbiyow, Ilaaheenna, kuwaas oo dadka aad uga bixiyey dalkii Masar, gacan xoog leh ayaa ku hogaamiyay oo uu naftaada sameeyey magac sida waafaqsan maanta: waannu dembaabnay, aynu samaynay qaldan.
9:16 Rabbiyow, waayo, xaqnimada oo dhan, jeedsadaan, Waxaan kaa baryayaa inaad, cadhadaadii iyo cadho Magaaladiina, Yeruusaalem, oo buurtayda quduuska ah ka. Wixii, dembigayaga aawadiis iyo xumaatooyinkii awowayaashood our, Yeruusaalem iyo dadkaagu waa cay in kuwa na hareerayn oo dhan.
9:17 Hadda, oo sidaas daraaddeed, Iska jira, Ilaahow, baryadayda anoo addoonkaaga ah, iyo codsi uu, oo daaha ka wejigaaga aad meeshayda quduuska ah ka badan, oo waa cidla, aawadiis adiga kuu gaar ah, waayo,.
9:18 Dhegihiinna soo dhiga, Rabbiyow, Ilaahayow, oo maqal, oo indhahaaga kala qaad oo fiiri cidla iyo magaalada u taliya oo magacaaga loogu yeedho. Waayo, ma aha iyada oo qiil in aan bixino codsiyada aad wejigayga uga hor, laakiin iyada oo tirada buuxda oo aad u naxariistay.
9:19 Iska jira, Rabbiyow. waan ku baryayaaye, Rabbiyow. Leexo, oo dhaqmaan. Ha ka raagin, aawadiis adiga kuu gaar ah, waayo,, Rabbiyow, Ilaahayow, maxaa yeelay, aad magacayga loogu yeedho magaaladaada ka badan iyo in ka badan dadka aad. "
9:20 Oo intii aan weli dembiyadiinna oo aan hadalka iyo tukanayay oo uu wax qiranayay, iyo dembiyadii dadka aan, Israa'iil, iyo qurbaan baryadayda hortiisa Ilaahayga, oo ku hadlaya magaca buurta quduuska ah oo Ilaahay,
9:21 sidii aan weli hadlayay Salaadda, bal eeg, ninkii Jibriil, oo aan markii hore riyada ku arkay bilowga, duulaya dheereeyaa, i taabtay mar allabarigii fiidnimada.
9:22 Oo haddana wuxuu i baray, oo wuxuu ila hadlay oo wuxuu ku yidhi, "Hadda, Daniel, Waxaan u soo baxay inaan idin baro iyo inay kaa caawiyaan inaad fahamto.
9:23 Bilowga baryadiinna, fariin ku soo baxay, weli waxaan u imid inaan kuu fasiro maxaa yeelay, waxaad tahay nin oo doonaya. Sidaa darteed, waa in aad fiiro dhow yahay inuu fariin iyo riyada.
9:24 Toddobaatan toddobaad of sano yihiin dadkaaga iyo magaaladaada quduuska ah, si xadgudub in dhammaan doonaan, oo dembiga ka gaaraan dhammaan doonaan, oo xumaantooda waa laga tirtiri doonaa, oo si caddaalad ah in weligeed ah loo keenaa in, iyo aragtida iyo wax sii sheegidda la oofin doono, iyo Saint quduusiinta la subki doono.
9:25 Sidaa darteed, og oo iska jira: ka soo baxay erayga in ay mar kale dhiso Yeruusaalem, ilaa hogaamiyaha Masiix, waxaa jiri doona toddoba toddobaad ee sano, iyo laba iyo lixdanka toddobaad ee sano; iyo Jidka balaadhan oo mar dhisi doonaa, oo derbiyadeeda la, in waqti iyo cidhiidhiga.
9:26 Oo ka dib markii laba iyo lixdanka toddobaad ee sano, Hogaamiyaha Masiixa la dilo doono. Oo dadka ayaa beenisay isaga ma noqon doono. Markaasaa dadkii waxay, markuu dhihi kooda ugu soo gaaray, magaalada iyo meesha quduuska ah baabbi'in doonaa. Oo dhammaadkeeduna wuxuu ahaan doonaa burburka, iyo, ka dib markii dhamaadka dagaalka, cidla la taagi doonaa.
9:27 Laakiin kuwo badan axdi kula wuxuu xaqiijin doonaa muddo hal todobaad ah sano; iyo badh ee toddobaadka of sano, dhibanaha iyo allabari ku dhawaad ​​joogsan doonaa; laakiin waxaa jiri doona macbudka baas oo hallaynta ah. Oo cidla ay sii wadi doonto xataa dhammaystirmaysaa iyo dhamaadka. "
10:1 Sannaddii saddexaad oo Kuuros, oo ahaa boqorkii Faaris, fariin loo muujiyey Daanyeel, odhan jiray Beelteshaasar, iyo hadal run ah, iyo xooggaaga weynu. Oo isna wuxuu fahamsan yahay fariinta, waxgarashada waxaa loo baahan yahay in aragti.
10:2 Oo waagaas, Waxaan, Daniel, barooranayay saddex toddobaad oo maalmood.
10:3 kibis suurad wacan ma aan cunin, oo mana hilib, oo aan khamri, afkayga galay, hana la ii marisay subkay, ilaa saddex toddobaad maalmood dhammaadeen.
10:4 Laakiin maalintii afar iyo labaatanaad, bisheedii kowaad,, Waxaan ahaa ee soo socota ilaa webiga weyn, oo waa Xiddeqel:.
10:5 Oo indhahaygii baan kor u taagay, oo waxaan arkay, oo bal eeg, hal nin dhar wanaagsan, oo ku xidhnaa gunaanadmay dahabkii ugu fiicnaa,
10:6 oo meydkiisiina wuu ku yiil wuxuu u ekaa dhagax ah oo dahab ah, oo wejigiisiina wuxuu lahaa wuxuu u ekaa hillaac, iyo indho laambad gubanaya uu, oo uu gacmaha iyo in dhan, midhona waa jidkii cagaha oo dhan ayaa muuqaalka kore ee naxaasta Daawatay, oo codkiisuu hadlayay wuxuu u ekaa codka dadka faraha badan a.
10:7 laakiin waxaan, Daniel, oo keliya ku arkay riyo ah, waayo, nimankii ila socday ma ay u arkaan, laakiin cabsi aad u weyn loola cararay iyaga u taliya, oo waxay ku carareen dhuunto.
10:8 Iyo aniga, isagoo keligiis la tagay, waxaan arkay waxan weyn ee lay tusay, oo waxaa ku hadhay xoog iguma, Oo weliba, my muuqaalka ayaa si, oo waxaan qallashaa, anigoo aan lahayn xoog ay.
10:9 Oo haddana waxaan maqlay codkii erayadiinna uu, oo markii aan maqlay, Waxaan jiifsaday jahawareer on wejigayga, oo aan wejigayga ku dhowaaday inuu dhulka ku.
10:10 Oo bal eeg, gacanta i taabatay, oo ii soo kulmisay jilbaha iyo laabatooyinka gacmahayga u gal.
10:11 Oo isna wuxuu igu yidhi, "Daniel, nin hilowga, bal garo erayada aan kugula hadlayo in, oo aad qummanaan naftaada taagan, waayo, hadda waxaan idiin soo diray. "Oo markuu waxyaalahaas ku yidhi ayaa ii, Ayaan istaagay anigoo gariiraya.
10:12 Oo isna wuxuu igu yidhi, "Ha ka baqin, Daniel, maxaa yeelay, maalintii ugu horraysay oo aad qalbigaaga u soo jeedi in ay fahmaan, by naftaada dhadhansiiyey hortiisa Ilaahiinna, erayadaada ayaa Dhumeen, oo waxaan kuugu soo gaaray, sababtoo ah erayada aad.
10:13 Laakiin hogaamiyaha boqortooyada Faaris ii difaacnay kow iyo labaatan maalmood, oo bal eeg, Michael, mid ka mid ah hoggaamiyayaasha hoose, yimid inuu i caawiyo, halkaasna ayaan ku hadhay kii boqorka ku xigay Faaris.
10:14 Laakiin waxaan u imid inaan idin baro waxa ku dhici doona dadka aad ugu dambaysta, maxaa yeelay, aragtida waa muddo dheer ka hadda. "
10:15 Oo intuu erayo igu hadlaya sidan, Wejigayga waan dhulka ku soo tuuray, oo iska aamusay.
10:16 Oo bal eeg, wax u eg Wiilka Aadanaha ayaa bushimahayga taabtay. Markaasuu, afkayga furitaanka, Waxaan la hadlay oo wuxuu ku yidhi kii i soo hor istaagay in ay, "Sayidkaygiiyow, at hortiisa idinka mid ah, addimada my u noqday mid itaaldaran oo itaalna kuma jirin ayaa igu hadhay ee.
10:17 Oo sidaas daraaddeed, Anoo addoonkaaga ahu sidee, sayidkaygiiyow, sayidkaygiiyow hadli kartaa? Waayo, xoog ma igu jiraa; iyo xataa neefsashada la carqaladeeyo. "
10:18 Sidaa darteed, kii u ekaa nin, mar kale i taabtay oo i xoogeeyey.
10:19 Oo isna wuxuu yidhi, "Ha ka cabsan, nin yahow xiisootay. Laga yaabaa in aad nabad noqon. Kalsoonaada oo xoog yeelo. "Oo markuu ila hadlay, waxaan soo kabsaday, oo waxaan idhi, "Hadal, sayidkaygiiyow, waayo, waad i xoogaysay. "
10:20 Oo isna wuxuu yidhi, "Miyaadan ogayn sababta aan u imid in aad? Oo soo socda waan soo noqon doonaa, inay la diriraan oo amiir u ahaa reer Faaris ku. Markii aan ka tagay, ayaa waxaa u muuqday oo amiir u ahaa Gariig fara yimid.
10:21 Laakiin, in runta, Ayaan wax idiinka sheegayaa waxa lagu qeexay in qorniinka runta. Oo ninna waa kaalmeeyahayga waxyaalahan oo dhan, Michael marka laga reebo aad hogaamiye. "
11:1 "Oo sidaas daraaddeed, ka sannaddii kowaad oo Daariyus oo reer Maaday, Waxaan shirkadda istaagay, si uu yaabaa in lagu xoojiyaa oo wuxuu u xoogaystay.
11:2 Oo haatan waxaan ku dhawaaqi doonaa in aad runta. Bal eeg, ilaa hal dhibic qaarkood, saddex boqor baa Faaris istaagi doonaan, iyo kan afraad waa la barwaaqaysiin doonaa aad iyo aad u xoog iyaga oo dhan kor ku xusan. Oo markuu ayaa koray oo xoog by khayraadka uu, uu soo kicin doonaa dhammaan boqortooyada Gariigta.
11:3 Laakiin waxaa kici doona boqor xoog badan, oo uu xoog weyn ku talin doona, markaasuu wuxuu samayn doonaa wixii uu doono.
11:4 Oo markuu ayaa istiwooday, boqortooyadiisa waa la kala jejebin doonaa waxaana loo kala qaybin doonaa afarta dabaylood oo samada,, laakiinse uma ay soo Farcankiisu, midna wuxuu sidii xooggiisu uu garoomada. Waayo, boqortooyadiisii ​​waa la kala dildillaacsan doonaa burbureen, xataa kuwa dibadda ah, kuwaas oo laga Bixiyey kuwan.
11:5 Markaasaa boqorkii dalka South waa la xoojin doonaa, weli mid ka mid ah madaxda uu ka adkaan doonaa isaga, oo isna wuxuu la maal talin doono, waayo, way weyn tahay uu domain.
11:6 Oo ka dib markii dhamaadka sanadaha, waxay soo dhisi doono xiriirka a, iyo gabadhii boqorkii dalka South ayaa iman doona boqorkii dalka North si uu u sameeyo saaxiibtinimo, laakiin iyadu ma heli doonaa xoogga hubka, mana farcankeeda istaagi doonaa shirkad, oo iyana waxaa loo dhiibi doonaa, oo ay la socdaan kuwa iyadii u keenay, raggeedii dhallinyarada, iyo kuwa u tacsiyaynaysay wakhtiyadii dhammaadkoodii.
11:7 Iyo xubin ka biqilka iyo xididdadiisa iyada taagi doonaan, oo isna wuxuu la iman doonaa ciidan, oo wuxuu soo geli doonaa galay gobolkii boqorka Waqooyiga, oo wuxuu iyaga ku xadgudbaan doonaa, iyo qaban doonaa si dhakhso ah.
11:8 Markaasay, marka lagu daro, ayuu sii qaadan doonaa Masar ilaahyadooda, iyo sanamyadooda la qoray, oo sidaas oo kale weelashoodii wanaagsanaa ee laga dahab iyo lacag. Waxa uu ku adkaan doonnaa boqorkii dalka Waqooyiga.
11:9 Markaasaa boqorkii dalka South geli doona boqortooyada, iyo soo laaban doono dalkiisa u.
11:10 Laakiin wiilashiisii ​​waxaa lala tiigsan doonaa, oo waxay soo shirin doonaa dad faro badan oo ka mid ah ciidamada oo aad u badan. Oo isna wuxuu imaan doontaa guuxa iyo badnaanta. Oo isna laga celinayne doonaa, oo isna waa la cadhoon doonaa, oo wuxuu dagaal uu casaan ku biiri doono.
11:11 Oo boqorkii Koonfureed, isagoo la loolan, soo bixi doonaa oo la diriri doonaa boqorkii dalka Waqooyiga, oo wuxuu diyaarin doonaa dad faro badan aad iyo aad u weyn, oo dad faro badan waxaa la siin doonaa inuu gacanta u galay.
11:12 Oo isna wuxuu qabsan doonaa dad faro badan, oo qalbigiisuna wuu kibri doonaa, iyo buu hoos u tuuri doonaa kumanyaalka kun, laakiin innaba ma guulaysan doono.
11:13 Waayo, boqorkii reer Waqooyiga beddeli doonaa istaraatijiyad iyo dad faro badan oo ka badan intii hore diyaarin doonaa, iyo dhamaadka jeer oo sano, uu u guuxi doonaan weeraryahanka ciidan faro badan wata iyo hantida aad iyo aad u weyn.
11:14 Oo wakhtigaasna, badan oo ku kici doonaan oo ahaa boqorkii dalka Koonfurta. Oo sidaas oo kale wiilashii khaa'inno ah dadkaaga ku dhex jira isu sarraysiin doonaa, si ay u riyadiisii, oo ay dumaan doonaa.
11:15 Markaasaa boqorkii dalka North ku imaan doono iyo gaadiid doonaa shuqullo hareereeyo, oo isna wuxuu qabsan doonaa magaalooyinka ugu deyr. Oo gacmaha South isma hor taagi doonaan isaga, oo kuwuu doortay ayuu u soo kici doonaa in ay iska caabin, laakiin xoogga maayo.
11:16 Oo markuu yimaado, wuxuu samayn doonaa oo kaliya sida uu doono, oo ma jiro dhanka ah wejigiisuu u taagan waxaa jiri doona. Oo isna wuxuu dalka ku caan istaagi doonaan, oo waa la wada baabbi'in doonaa gacanta by.
11:17 Oo waa inuu wejigaygaan u jeedin doonaa in ay ku dadaalaan in ay boqortooyadiisa oo dhan qabtaan, oo wuxuu ka dhigi doonaa xaaladaha cadaalad ah isaga la. Oo isna wuxuu ku siin doonaa haweenka ka mid ah gabadh, si ay dabadeedna afgembiyaan. Laakiin iyadu ma ay taagnaan doonaan, mana ahaan doontaa isaga, waayo,.
11:18 Oo isna wuu soo jeesan doonaa xagga gasiiradaha, oo wuxuu ku qabanaysa badan. Oo isna wuxuu ka dhigi doonaa in hoggaamiyaha ceebtoodana joojin, iyo cay uu u beddelmi doonaa agagaarka isaga, waayo,.
11:19 Oo isna wuxuu wejigiisa u boqortooyadiisa, isagoo dalkiisii ​​jeesan doonaa, oo wuxuu layn doonaa, oo afgembiyi doonaa, laakiinse wuu diiday inuu ku guulaysan doono.
11:20 Oo waxaa meeshiisii ​​istaagi doona in uu hal meel ah waa kuwa ugu waxtar lahayn oo aan istaahilin of sharaf boqornimadiisa. Oo wakhti yar oo gaaban, uu la dhiban daallanna doonaa, laakiin aan xanaaqi, ama dagaal.
11:21 Oo waxaa meeshiisii ​​istaagi doona in uu meel ka mid ah Didabadda, oo isagu ma waxa lagu meelaynayaa Sharafta boqorku a. Oo isna wuxuu imaan doonaa qarsoodi, iyo boqortooyadii khiyaanada uu heli doonaa.
11:22 Oo gacmaha dagaalka lagu weeraray doonaa wejigiisa hor iyo jajabi doontaan doonaa, iyo, marka lagu daro, oo amiir u ahaa xiriirka.
11:23 Markaasay, ka dib markii saaxiibo, wuxuu isaga khiyaamo doonaa, oo isagu wuxuu kor u tegi doonaa oo la dad yar ka Adkaan.
11:24 Oo isna wuxuu geli doonaa magaalo hodan iyo talo soo jeedin, markaasuu wuxuu samayn doonaa wixii ay awowayaashiis Mana, iyo awowayaashayadii toona ma aabbihiis. Waxa uu ku kala firdhin doonaa, boolida ay, iyo ciyaan ugaadhsigooda, iyo maalkooda, iyo dhisi doono qorshe gees ah Ka ugu Samra, oo ilaa wakhti.
11:25 Oo xooggiisii ​​oo qalbigiisuna wuu cadhooday doonaa boqorka koonfureed ciidan faro badan wata. Markaasaa boqorkii dalka South la xanaajiyeen doonaa dagaal by isagoo sokeeye badan iyo xaalado aad iyo aad u wanaagsan, iyo kuwan ma taagnaan doonaan, waayo, waxay dhisi doono qorshe isaga ka gees ah.
11:26 Oo kuwa kibis kula cunaan wuu burburin doonaa, iyo ciidankiisii ​​ayaa la baabi'iyay doonaa, iyo aad u badan ku dhiman doonaa, iyagoo ah kuwii lagu qaybshay.
11:27 Markaasuu soo jeediyey qalbigii laba boqorro waxay kuu noqon doonaan mid ah, si ay u samayn doonaa waxyeello, oo waxay been bay ku hadlaan doonaa miis keliya, laakiinse iyagu ma guulaysan doonaan, maxaa yeelay, weli dhamaadka waa wakhti kale.
11:28 Oo isna wuxuu ku noqon doonaa dalkiisii ​​oo khayraadka badan. Oo qalbigiisuna ka gees buu axdiga quduuska ah waxay noqon doonaan, oo wuxuu u shaqeyn doonaa, oo uu soo laaban doonaa dalkiisa u.
11:29 Wakhtigii loo xugmay, ayuu ku noqon doonaa, oo isna wuu doonaa Koonfurta, laakiin wakhtiga ugu dambaysta ma noqon doono sidii kii hore.
11:30 Oo maraakiibta Greek oo dadka Roomana way isaga soo degi doona, oo isna waa laga wareemay doonaa, oo u baxsan doonaan, oo waxay yeelan doonaan quudhsado ka dhanka ah axdiga quduuska ah, oo wuxuu u shaqeyn doonaa. Oo isna wuxuu ku soo noqon doonaa oo la tashan doonaa cadaawayaashoodu, kuwaas oo ka tageen axdigii uu meesha quduuska ah.
11:31 Oo ciidan baa qaadi doono kooxdiisa, oo waxay nijaasayn doonaan meesha quduuska ah ee xoogga, oo waxaa laga qaadi doonaa allabari oo joogtada ah iyo bedeli doono waxa baas oo hallaynta.
11:32 Iyo kuwa aan cibaadada lahayn gudahood axdiga si khiyaano ah ku dayan doonaan, laakiinse dadka, iyagoo Ilaah garanaya, samray doonaa oo u shaqeyn doonaa.
11:33 Iyo macalimiinta oo dadka ku dhex bari doonaa badan, laakiin ay la dumay seef kaga baabbi'i doonaan, iyo dab, iyo maxbuusnimo, iyo weerarada maalmo badan.
11:34 Oo markii ay dhacday, waxay lagu taageeri doonaa caawimaad yar, laakiin qaar badan oo ka codsan doonaa inay si khiyaano.
11:35 Iyo qaar ka mid ah bartay lagu Halaagsamay doonaa, in ay ku kululaan karaan oo doortay waana ku daahir, ilaa waqtiga loo dejiyay, maxaa yeelay, waxaa jiri doona weli waqti kale.
11:36 Markaasaa boqorkii wuxuu u shaqeyn doonaa si waafaqsan doonistiisa, oo isna waa la sarraysiin doonaa oo waxaa loo kicin doonaa ilaah kasta. Oo isna wuxuu waxyaalo waaweyn hadli doonaa Ilaaha ilaahyada, oo uu xakameeyo doonaa, ilaa hamiday la dhamaystiro. Marka uu dhammaado, xadka la gaadho iyadoo la hubo.
11:37 Oo wuxuu ku siin doonaa welwelina Ilaaha awowayaashiis, oo wuxuu ahaan doonaa waxa dumarku jecel yihiin, iyo inuusan ka qeyb gali doona in ay ilaahyo kasta, maxaa yeelay, wuxuu u soo kici doonaa wax walba oo ka dhan ah.
11:38 Laakiin wuxuu ku samayn doonaa caabudeen Maozim ilaaha meeshiisii, iyo, ilaah aanay awowayaashiis, ma aan ogayn, ayuu dahab ku caabudi doonaan, iyo lacag, iyo dhagaxyo qaali ah, iyo waxyaalo qaali ah.
11:39 Oo isna wuxuu u shaqeyn doonaa in la xoojiyo Maozim ilaah qalaad, kuwaas oo uu ku ogaatay, oo wuxuu u kordhin doonaa ammaan ay, oo waxaan siin doonaa xoog badan, oo wuxuu qaybin doonaa dhulka for free.
11:40 Markaasay, waqtiga loo dejiyay, oo ahaa boqorkii dalka South ugu dagaalami doonaa isaga ka gees ah, oo wuxuu boqorkii dalka North waxaa iman doona isaga ka gees ah sida duufaan, isagoo wata gaadhifardood,, iyo rag fardooley ah la, iyo raxan weyn, wuxuuna soo dhex geli doonaa dalalkii, iyo burburin doonaa oo dhex maraya.
11:41 Wuxuuna soo dhex geli doonaa dhulka quruxda leh, iyo dad badan oo ku dhici doonaan. Laakiin oo kaliya kuwaas oo la badbaadin doonaa gacanta ka: Edom, iyo reer Moo'aab, iyo qaybta hore ee reer Cammoon.
11:42 Oo waa inuu gacanta saaraa dalalka xoori doonaa, oo dalka Masarna ma baxsan doono.
11:43 Oo isna wuxuu ku xukumi doonaa laabta khasnad oo dahab ah, iyo lacag, iyo dhammaan waxyaalaha qaaliga ah ee Masar, oo sidaasoo kalena wuxuu u dhex Liibiya iyo Itoobiya idlaan doonaan.
11:44 Iyo Wararka Xanta Bariga iyo Waqooyiga doono isaga dhibaato. Oo wuxuu raacay dad aad u badan waxay imaan doontaa inaad baabbi'isid oo aad u fuliyaan badan.
11:45 Oo isna wuxuu u dhuujin doonaa taambuuggiisa, taambuuggiisa, u dhaxaysa badda iyo, buur ah oo caan ah, quduusna ah, oo uu xataa ilaa ay shir iman doonaa, oo ninna ma isaga caawin doonaa. "
12:1 "Laakiin wakhtigaas Michael soo kici doonaa, Hogaamiyaha weyn, kuwaas oo u taagan tahay wiilashii dadkaaga. Oo wakhtigii la iman doonaa, sida mid aan jirin tan wakhtigii quruumaha bilaabay, ilaa wakhtigaas. Markaasay, wakhtigaas, dadka aad la badbaadin doonaa, oo dhan, kuwaas oo lagu helay oo ku qornaa doonaa kitaabkii.
12:2 Oo qaar badan oo ku hurda ciidda dhulka toosin doonaa: qaar ka mid ah si nolosha weligeed ah, iyo kuwa kale si ay cay in ay mar walba arki.
12:3 Laakiin kuwa ku baray dhalaali doonaan sida nuurka samada, iyo kuwa baro badan oo dhinaca caddaaladda, sida xiddigaha weligiis go'aynin.
12:4 laakiin aad, Daniel, xirto fariinta kitaabkana shaabadee, ilaa wakhtiga la aasaasay. Qaar badan oo dhex mari doonaa, aqoontuna waa kordhi doontaa. "
12:5 Iyo aniga, Daniel, fiiriyey, oo bal eeg, Sidoo kale laba kale istaagay, mid ka badan halkan, on bangiga webiga, iyo kuwa kale oo badan waxaa, on bangiga kale ee webiga.
12:6 Oo waxaan ku idhi ninkii, kuwaas oo ahaa dhar wanaagsan, kii kor maray biyihii webiga ag taagan, "Ilaa goormuu ahaan doonaa ilaa dhamaadka yaababkanu?"
12:7 Oo waxaan maqlay ninkii, kuwaas oo ahaa dhar wanaagsan, kii kor maray biyihii webiga ag taagan, markuu gacantiisii ​​midig iyo gacantiisii ​​bidix kor u qaaday xagga samada, oo waxay ku dhaarteen, wuxuuna by kan weligiis nool, in ay noqon doonto muddo, iyo jeer, iyo wakhtiga nus. Oo markay kala firidhsan gacantii dadka quduuska ah la buuxiyo, waxaas oo dhan waa la dhamaystiri doono.
12:8 Oo haddana waxaan maqlay oo ma ay garan. Oo waxaan ku idhi, "Sayidkaygiiyow, waxa ay noqon doontaa waxyaalahaas ka dib?"
12:9 Oo isna wuxuu yidhi, "Tag, Daniel, waayo, erayadii waa la xidhay oo la shaabadeeyey ilaa wakhtiga ugu Fundka.
12:10 Qaar badan oo ka mid ah loo doortay waana ku daahir, iyo, sida haddii dab, waxay la tijaabin doonaa, iyo cibaadada impiously u shaqeyn doonaa, oo midkoodna aan cibaadada ku garan doontaa, weli macalimiinta fahmi doonaan.
12:11 Oo wakhtiga marka allabari oo joogtada ah waa laga qaadi doonaa oo baas oo hallaynta ah la taagi doonaa, waxaa jiri doona kun iyo laba boqol iyo sagaashan maalmood.
12:12 Haddaba waxaa barakaysan kii suga iyo gaadho ilaa hal kun iyo saddex boqol iyo shan iyo soddonka maalmood.
12:13 laakiin aad, tago, ilaa wakhtiga loo dejiyay, oo waan idin nasin doonaa iyo meel adiga istaagi doonaa dhamaadka maalmood.
13:1 Oo waxaa jiray nin ku nool Baabuloon, oo magiciisa la odhan jiray Joakim.
13:2 Oo wuxuu helay xaaskiisa la odhan jiray Susanna, gabadhii Xilqiyaah, kaasoo ahaa mid aad u qurux badan oo kuwa Eebe ka dhawrsada.
13:3 Waayo, waalidkeed, maxaa yeelay, waxay ahaayeen kuwa xaqa ah, ayaa bartay gabadhooda sida uu sharciga Muuse.
13:4 Laakiin Joakim ahaa mid aad u qani ah, oo wuxuu lahaa yaalliin gurigiisa u dhow, iyo Yuhuuddii la socotay, awelna loola isaga u, maxaa yeelay, wuxuu ahaa ugu sharafta leh oo dhan.
13:5 Oo laba oday garsoorayaasha la magacaabay oo dadka ku dhex sannaddaas, kaasoo Rabbigu wuxuu leeyahay,, "Xumaantooda u soo baxday Baabuloon, ka xaakinnadii oday, kuwaas oo u muuqday in ay maamulaan dadka. "
13:6 Kuwaas waxaa ku badan guriga Joakim, oo dhan u yimid, kuwaas oo u baahan xukunka.
13:7 Laakiin markii dadkii ka tegey at hadhkii ku, Susanna galay oo socday ku dhawaad ​​in beero ninkeeda.
13:8 Oo odayaashii arkay iyada galaya iyo marayay agagaarka maalin kasta, oo waxay iyagoo la jecel yahay dhinaca iyada.
13:9 Oo iyana waxay ku qalloociyeen sababta oo indhahoodu waxay ku soo jeesteen, oo sidaas daraaddeed ma ay doonaynin inuu indhihiisa cirka, mana Bini'israa'iillow xusa xukummadayda oo kaliya.
13:10 Oo sidaas daraaddeed waxay ahaayeen labada ku dhaawacmeen by jacaylka iyada, weli ma ay daaha ka murugadooda in midkiinba midka kale.
13:11 Waayo, iyagu waxay ku ceeboobi doonaan inuu u muujiyo in midba midka kale sida ay u doonayaan, oo raba in uu iyada la jiifsado.
13:12 Oo sidaas daraaddeed waxay si taxadar leh maalin walba daawaday inuu arko. Oo mid baa ku yidhi kii kale,,
13:13 "Aannu tagno guriga, waayo, waa wakhti qadada. "Oo bixiddaada, waxay kale oo ka tageen mid ka mid ah.
13:14 Oo haddana soo laabtay, waxay yimaadeen meel ka mid ah, iyo, kale ee sabab kasta oo waydiinaya, waxay qirtay inay doonayaan. Markaasay waxay ku heshiiyeen in ay qarka u saaran waqti marka ay awoodi doonaan in ay iyada oo keli ah ka heli.
13:15 Laakiin waxaa dhacay, halka ay daawaday waayo, maalintii fursad, in ay ku soo gashay waqti gaar ah, sidii shalay iyo maalintii ka hor, la Hablihii laba kaliya, oo waxay doonayeen in ay ku maydho beero ah, sababta oo ah waxa uu ahaa sidaas u kulul.
13:16 Oo waxaa halkaas ninna ma joogin, marka laga reebo labada oday ee ku dhuunto, oo waxay iyada waxbarashada.
13:17 Oo sidaas daraaddeed waxay Hablihii yiri, "Waxaad ii keentaan saliid iyo cadar, oo albaabbadii beero xidha, sidaas darteed waxaa laga yaabaa in aan ku dhaq. "
13:18 Oo iyana waxay yeeleen sidii ayay ku amray. Oo iyana waxay ku xidhanno albaabbada beero iyo bidix iyada oo albaabka dib u gura waxa ay loo baahan yahay, oo iyagu ma ay ogayn in waayeelladu ku qarinaya gudahood.
13:19 Laakiin marka Hablihii tageen, labada oday kacay oo intuu dhaqsaday iyadii, oo waxay yidhaahdeen,
13:20 "Bal eeg, albaabbadii beero ku xiran yihiin, oo ninna ma noo arki kartaa, Oo innaguna waxaynu nahay in rabitaan kuu. Maxaa yeelay, waxyaalahan, raali noo oo na la jiifsado.
13:21 Laakiin haddii aad maayo, aan xambaarro idinku marag ah in nin dhalinyaro ah uu kula jiray iyo, sabab this, aad ka iska diray hablihii aad. "
13:22 Susanna taahay oo ku yidhi, "Waxaan xiran ahay in dhinac kasta. Waayo, haddii wax kasta waxaan u sameeyaa, waa dhimasho ii noqdeen; oo weliba hadday ku anigu ma samayn, Anigu ma baxsan doono gacmahaaga.
13:23 Laakiin waxaa iiga roon inaan soo daahin dhici gacmahaagaan kuu soo geliyey waa, badan dembaajiyey ee Rabbiga hortiisa ah. "
13:24 Iyo Susanna qayliyey cod weyn, laakiin odayaashii sidoo kale qayliyeen inay iyada ku kacaan.
13:25 Markaasaa midkood wuxuu ku dhaqsadeen inay iridda beero iyo furay.
13:26 Oo sidaas daraaddeed, addoommadii guriga maqlay qayladoodii ee beero ah, ay ku yaaceen in illinka ka dib si aad u aragto waxa ka dhacaya.
13:27 Laakiin ka dib markii raggii odayaasha ku hadlay, addoommadii aad bay u ceeboobeen, waayo, waxaa aan weligood ahaanin wax noocan ah ayaa sheegay in ku saabsan Susanna. Oo waxaa dhacday in maalintii dambe,
13:28 marka dadku waxay u yimaadeen inay ninkeeda Joakim, in labada oday magacaabay sidoo kale yimid, full of qorshaha sharka lahu Susanna, si ay iyada u dilaan.
13:29 Oo iyana waxay dadka ka hor ayaa sheegay in, "Dira Susanna, gabadhii Xilqiyaah, Haweenaydii Joakim. "Markiiba waxay u cid diray iyadii.
13:30 Oo iyana waxay ku timid iyadoo waalidkeed, iyo wiilashiisii, iyo qaraabada oo dhan.
13:31 Waxaa intaa dheer, Susanna ahaa aad iyo aad u xasaasi ah oo qurux badan muuqaalka.
13:32 Laakiin kuwa sharka lahu kuwa amray in wejigeeda waa la qaawin, (waayo, iyadu waxay ku dednaa,) si ay ugu yaraan inay ku qanci quruxdeeda la.
13:33 Sidaa darteed, iyada u gaar ah oo iyada ooyay yiqiin oo dhammu.
13:34 Weliba labada oday magacaabay, anigoo ku dhex jira dadka, gacmahooda madaxa u saaray.
13:35 iyo oohin, kor ayay u eegi samada, waayo qalbigeeda lahaa rumaysadkiinna xagga Rabbi ka.
13:36 Oo odayaashii magacaabay ayaa sheegay in, "Iyada oo aan ka hadleynay socod ee beero oo keliya, this ka mid ah u yimid in la laba Hablihii, oo iyana waxay albaabbadii beero xidha, iyo tii iyada ka soo diray Hablihii.
13:37 Markaasaa nin dhallinyaro ah, iyada oo u yimid, kuwaas oo ahaa in qarinayaan, oo wuxuu la jiifsaday.
13:38 Intaas waxaa sii dheer, tan iyo markii aan ku jiray geeska a of beero ah, maxaa yeelay, xumaantan, ilaa aan soo orday si, oo waxaannu aragnay iyagii ku soo wada consorting.
13:39 Markaasay, dhab ahaan, aan awoodin in ay qabtaan, maxaa yeelay, wuxuu ahaa naga xoog badan, iyo furitaanka ay albaabbadu, uu ka soo booday.
13:40 Laakiin, tan iyo markii aan sidaas mid ka mid ah la qabtay, waxaan dalbaday inay ogaadaan kuwa ninkii dhallinyarada ahaa, laakiin waxay ahayd dooneyn inaad noo sheegto. On arrintan, annagaa ka marag. "
13:41 Dadkii badnaa ayaa rumeysan, sida haddii ay ahaayeen odayaasha iyo xaakinnadii dadka, oo waxay iyada in dhimasho lagu xukumo.
13:42 Laakiin Susanna qayliyey cod weyn oo wuxuu ku yidhi, "Weligeed ah Ilaah, cid og waxa Maqan, kan dhammaan wax walba ogyahay ka hor inta ay dhacaan,
13:43 aad u ogaato in, waxay dhaleen marag been ah iga gees ah, oo bal eeg, waa inaan dhintaa, In kastoo aan waxyaalahan midkoodna samayn, oo nimankanu xaasidnimada abuurtay iga gees ah. "
13:44 Laakiin Sayidku waa u Dhumeen codkeeda.
13:45 Oo markay ka tagaan si ay dhimasho kaxeeyey, Rabbigu wuxuu sara kiciyey ruuxii quduuska ah oo wiil dhalinyaro ah, magiciisa la odhan jiray Daniel.
13:46 Oo isna wuxuu ku qayliyey cod weyn, "Waxaan nadiif ah dhiiggiisa this mid ka mid ahay."
13:47 Markaasaa dadkii oo dhan, celin xaggiisa, sheegay, "Waa maxay hadalkan in aad leh?"
13:48 laakiin waxa uu, halka taagan dhexdooda, sheegay, "Ma waxaad tahay doqon, Wiilashii Israa'iil, in aan wax u xukumaya oo aan ogayn wixii runta waa, aad u cambaareeyay ka mid ah reer binu Israa'iil gabadhiisa?
13:49 Ku noqo xukunka, maxaa yeelay, waxay marag been ah ku hadlay iyada ka gees ah. "
13:50 Sidaa darteed, dadka dhaqso u soo laabtay, iyo raggii odayaasha ku yidhi isagii, "Kaalay oo fadhiiso na dhex oo na tusi, tan iyo ahu uu idin siiyey sharafta da 'weyn. "
13:51 Markaasaa Daanyeel ku yidhi iyaga, "Sooca, kuwaas oo meel fog ka soo midba midka kale, oo waxaan iyagii u kala xukumin. "
13:52 Oo sidaas daraaddeed, markii ay kala qaybsan, mid kale, ayuu u yeedhay mid ka mid ah, oo wuxuu ku yidhi isagii, "Waxaad xun qadiimiga-adaygnimo, hadda dembiyadiinna ayaa ka soo baxay, taas oo aad ka go'an ka hor,
13:53 idinkoo xukumaya xukummadaada xaqa daran, cadaadinayaan qabin, iyo goob lacag la'aan ah eed lahayn, in kastoo Rabbigu wuxuu leeyahay,, 'The aan waxba galabsan oo kaliya waa in aad ma uu dilin.'
13:54 Haddaba, haddii aad iyada arkay, sheegi aad ka yar oo geed arkay iyagii ku soo wada hadalka. "Waxa uu sheegay in, "Under geed canbaha mastic."
13:55 Markaasaa Daanyeel ku yidhi, "Runtii,, aad ku been abuurtay madaxiinna. Waayo, bal eeg, malaa'igtii Ilaahna, isagoo xukunka isaga ka helay, aad kala dillaaci doontaa hoos dhexe.
13:56 Markaasay, gees u isagoo ku riday, wuxuu kale oo ahaa ku amray inay soo dhowaadaan, oo wuxuu ku yidhi isagii, "Waxaad farcankaaga reer Kancaan, oo ma aha kuwa dadka Yahuudah, qurux ayaa ku khiyaanay, iyo rabitaan ayaa qalbigaaga qalloociyeen.
13:57 Saasaana idiin sameeyo gabdhaha reer binu Israa'iil, oo waxay, ka cabsi, consorted aad la, laakiin reer Yahuudah gabadh uma dulqaadan doono xumaantaadii.
13:58 Haddaba, ii sheeg, kaas oo geed waxaad iyaga ku qabsaday wada hadalka. "Waxa uu sheegay in, "Under geed canbaha lalmada."
13:59 Markaasaa Daanyeel ku yidhi isagii, "Runtii,, waxa kale oo aad ku been abuurtay madaxiinna. Maxaa yeelay, malaa'igta ka mid ah oo sugaysa in Rabbiga, haysta seef, si aad gooysaan dhexe iyo aad ay u dilaan. "
13:60 Ka dibna shirka oo dhan ka dhex qayliyey isagoo cod weyn ku, oo Ilaah bay u duceeyeen, Badbaadiya kuwa ku sugaya isaga in.
13:61 Oo iyana waxay kaceen dhanka ah labada oday magacaabay, (waayo, Daniel iyaga la xukumay, by ay afka u gaar ah, ee sita marag been ah,) oo waxay iyaga ku sameeyey oo kaliya sidii ay iyagu sameeyey shar ay deriskiisa,
13:62 si ay u dhaqmaan sida ay sharciga Muuse. Oo iyana waxay la dilaa, iyo dhiig aan xaq qabin ahaa badbaadiyey maalintaas.
13:63 Laakiin Xilqiyaah iyo xaaskiisa Ilaah ammaaneen, gabadhooda, Susanna, la Joakim, ninkeedii, iyo qaraabada oo dhan, maxaa yeelay, waxaa la helay iyada oo Dullayn no.
13:64 Oo sidaas daraaddeed Daanyeel wuxuu noqday hortiisa nin weyn dadka maalintaas intii laga bilaabona, oo intaas ka dib.
13:65 Markaasaa boqorkii Astyages la dhigay oo la seexday awowayaashiis la. Oo Kuuros oo ahaa reer Faaris ahaa boqortooyadiisa helay.
14:1 Oo sidaas daraaddeed Daanyeel boqorka la nool, oo wuu ka ciso badnaa saaxiibbadiis oo dhammu waxay.
14:2 Haddaba waxaa jiray sanam la Baabuloon loo magacaabay Beel. Oo maalin kasta waxaa bixisay isaga iyo toban tallaabooyin weyn oo bur wanaagsan ah, iyo afartan neef oo ido ah, iyo lix iyo weelal khamri.
14:3 Markaasaa boqorkii wuxuu sidaas oo kale isaga caabudeen, oo maalin walba u baxay inuu isaga Khayrja, laakiin Daniel jeclaa inuu Ilaah. Markaasaa boqorkii wuxuu ku yidhi, "Maxaad aan Falana Khayrja Beel?"
14:4 Markaasay u jawaabeen, wuxuu ku yidhi isagii, "Maxaa yeelay, anigu ma Caabudi Sanamyo gacmo lagu sameeyey, laakiinse Ilaaha nool, oo abuuray samada iyo dhulka, iyo kii xoogga badan aadmiga oo dhan. "
14:5 Markaasaa boqorkii wuxuu ku yidhi, "Ma Beel aan u muuqdaan kuwo aad u ilaah nool a? Ha aad fiiriso sida uu cunaa oo la cabbaa maalin kasta?"
14:6 Markaasaa Daanyeel ku yidhi, dhoola, "Boqorow, ha khalad ma samayn, waayo, taasu waa mid ka mid ah dhoobo ah oo ku saabsan gudaha iyo naxaas ah oo ku saabsan ka baxsan, oo marna uu cunay. "
14:7 Markaasaa boqorkii wuxuu ku, cadhooday, u yeedhay isaga iyo wadaaddadiisa, oo wuxuu ku yidhi, "Haddii aadan ii sheeg yaa cunay kharashyada kuwan, waad ku dhiman doontaan.
14:8 Laakiin haddii aad muujin kartid in Beel baa cuntay, kuwaas oo, Daniel doonayo, maxaa yeelay, wuxuu ka gaaloobeen Beel. "Markaasaa Daanyeel boqorkii ku yidhi, "Ha u ahaato, Si eraygaaga waafaqsan."
14:9 Haddaba wadaaddadii Beel ahaayeen toddobaatan, naagahooda ay, iyo dhallaanka, iyo wiilashiisii. Markaasaa boqorkii ka tegey Daniel la macbudka Beel galay.
14:10 Markaasaa wadaaddadii reer Beel yiri, "Bal eeg, waxaan waa demayaan, Adiguna, Boqorow, ka soo baxay hilibka ah, iyo qaso khamriga, oo goortaad albaabkaaga xidhid,, oo ku shaabadeeya aad giraanta.
14:11 Oo markii aad soo gashay subaxdii, haddii aadan ogaaday in Beel ayaa dhan wada baabbi'iyey, aan oggolaan doono in dhimashada, ama haddii kale Daniel doono, ayaa been inaga gees ah. "
14:12 Laakiin waxay dareen ka jirin maxaa yeelay, waxay ka dhigtay galo qarsoodi ah miiska hoostiisa, oo waxay had iyo jeer ku soo baxay ayay ka dhex oo baabbi'iyey waxyaalihii.
14:13 Oo sidaas daraaddeed waxay u dhaceen, ka dib markii ay ka tageen, in boqorkii cuntooyinka Beel hor dhigay, iyo Daniel wuxuu addoommadiisii ​​ku amray, oo waxay u keeneen dambas, oo wuxuu iyaga ku xaadhin macbudka oo dhan hortiisa boqorka, iyo, sida in ay ka tageen, waxay albaabka xidha, iyo ka dib dhagixiina way la kaatunkii boqorka, iyana way ka tageen.
14:14 Laakiinse wadaaddadu soo galeen goor habeennimo ah, sida ay tahay caadada, iyo naagahoodii, iyo wiilashoodii, oo iyana way cuneen oo wax walba oo cabbeen.
14:15 Laakiinse boqorku wuxuu ku kacay uu iftiin ugu horeysay, iyo Daniel isaga la.
14:16 Markaasaa boqorkii wuxuu yidhi, "Ma shaabadihiisa ishaysta, Daniel?"Oo isna wuxuu ugu jawaabay, "Waxay ishaysta waa, Boqorow ".
14:17 Iyo sida ugu dhakhsaha badan uu albaabka u furay, boqorkii ku arkeen miiska, oo way qayliyeen oo waxay cod weyn ku dhawaaqay, "Great aad tahay, Beel The, oo ma aanay khiyaano ku kasta oo aad la. "
14:18 Markaasaa Daanyeel ku qoslay, oo haddana wuxuu qabtay boqorka, sidaas daraaddeed waxba ma uu geli lahaa, oo isna wuxuu yidhi, "Fiiri dhulka sallaxa ah, ogeysiis kuwaas oo raadkoodii waa kuwan. "
14:19 Markaasaa boqorkii wuxuu yidhi, "Waxaan arki wadadii rag, iyo dumarka, iyo carruurta. "Markaasaa boqorkii cadhooday.
14:20 Markaasaa wadaaddadii uu qabtay, oo naagahoodii, iyo wiilashoodii, oo waxay isagii tusay albaabbadii qarsoodi ah iyada oo loo marayo taas oo ay galeen oo wuxuu wada baabbi'iyey wixii miiska saarnayd oo.
14:21 Sidaa darteed, boqorku iyagii la gowracay iyo Beel geliyey xoogga Daniel, kuwaas oo afgembiyi doonaa isaga iyo macbudka.
14:22 Oo waxaa jiray masduulaa weyn ee meeshaas, iyo reer Baabuloon ayaa isaga caabudeen.
14:23 Markaasaa boqorkii Daanyeel ku yidhi, "Bal eeg, hadda ma baad u odhan kartaa in tani ma aha ilaah nool a; oo sidaas daraaddeed, isaga Khayrja. "
14:24 Markaasaa Daanyeel ku yidhi, "Waxaan Falana Khayrja waxaad Rabbiga, Ilaahayow, waayo, isagu waa Ilaaha nool. Laakiin mid aan ilaah nool a.
14:25 Sidaa darteed, aad i siisidna awoodda, Boqorow, oo waxaan ku soo dejin doonaa masduulaa oo aan seef ama kooxda. "Markaasaa boqorkii wuxuu yidhi, "Waxaan kugu siinayaa."
14:26 Oo sidaas daraaddeed Daniel qaaday garoonka, iyo xaydha, iyo timaha, oo iyagii ku soo wada kariyey. Oo wuxuu kaloo sameeyey buurbuur iyo masduulaagii afkiisii ​​galay oo wuxuu ku riday, markaasaa masduulaagii wuxuu kala dillaacay. Oo isna wuxuu yidhi, "Bal eeg, tani waa waxaad caabudaysaan. "
14:27 Marka Baabuloon maqlay this, iyana aad bay u cadhoodeen. Oo intuu isu ururiyey boqorka, oo waxay ku yidhaahdeen, "Markaasaa boqorkii wuxuu ku waxa uu noqday nin Yuhuudi ah. Oo isagu wuxuu dumiyey Beel, uu toogasho masduulaagii, oo wuxuu gowracay wadaaddada. "
14:28 Oo markay boqorkii ugu yimaadeen, oo waxay ku yidhaahdeen, "Samatabbixi Daniel noo, haddii kale waxaan adiga iyo reerkaaga soo dejin doonaa. "
14:29 Boqorkii wuxuu arkay in ay kaga hadlisiiyaan cadaadis, oo sidaas, lagu qasbay baahan, ayuu u dhiibeen Daniel.
14:30 Oo iyana waxay isagii tuuray bohoshii libaaxyada, oo isna halkaasuu ku jiray lix maalmood.
14:31 Intaas waxaa sii dheer, in bohoshii waxay ahaayeen toddoba iyo libaaxyo, oo waxay iyagii siiyey laba baqtigoodana maalin kasta, iyo laba laxaad, laakiin ka dibna waxay la aan iyaga siiyey, sidaa darteed way baabbi'in lahaa Daniel.
14:32 Haddaba waxaa jiray Yahuudiya nebi ah oo lagu magacaabo Xabaquuq, oo uu la kariyey cuntada yar oo kibis jejebiyey baaquli, oo uu u socday duurka, si ay u keenaan beergoosadkiinna.
14:33 Markaasaa malaa'igtii Rabbiga ku yidhi Xabaquuq, "Qaad hadhuudhka ah in aad leedahay Baabuloon, Daanyeel, kan ku Sugan bohoshii libaaxyada. "
14:34 Oo Xabaquuq, ayaa sheegay in, "Lord, Waxaan Baabuloon ma arag, oo anigu garan maayo bohoshii. "
14:35 Markaasaa malaa'igtii Rabbigu ku qabtay dusha sare ee madaxiisa, isaga iyo timaha madaxiisuna qaadeen, oo ku fadhiisiya Baabuloon, ka badan bohoshii, xoog uu ruux.
14:36 Oo Xabaquuq qayliyeen, oo wuxuu ku yidhi, "Daniel, addoonkii Ilaah, qaadan casho ah in Ilaah ayaa aad u soo diray. "
14:37 Markaasaa Daanyeel ku yidhi, "Waxaad ii soo xusuusan, Ilaahow, oo idinku innaba ma aydaan tagay kuwa idin jecel. "
14:38 Markaasaa Daanyeel ku kacay oo uu u cunay. Oo markaas Rabbiga malaa'igtiisa ayaa waxay si degdeg ah ku soo laabtay Xabaquuq inuu booskiisa.
14:39 Oo sidaas daraaddeed, maalinta toddobaad, boqorkii wuxuu aroor Daniel yimid. Oo isna wuxuu u soo dhowaaday bohoshii, iyo eegi in, oo bal eeg, Daniel ayaa la dhex fadhiya libaaxyo ah.
14:40 Markaasaa boqorkii wuxuu ku qayliyey cod weyn, oo wuxuu ku yidhi, "Great aad tahay, Rabbiyow, Ilaaha Daanyeel. "Oo isna wuxuu isagii ka baxay bohoshii libaaxyada '.
14:41 Intaas waxaa sii dheer, kuwii la joogi sababta uu la ridey, uu tuuray bohoshii, oo iyana way cuneen daqiiqad isaga ka hor.
14:42 Markaasaa boqorkii wuxuu yidhi, "Aan deggan oo dhan, oo dhulka oo dhan ka cabsan Ilaaha Daanyeel. Waayo, isagu waa Badbaadiye, calaamooyinkii iyo yaababkii dhulka shaqeeya, ayaa sii daayay Daniel ka bohoshii libaaxyada. "